Ingqikithi cholesterol 7 2 > Ukuhlaziya
Ukweqa imiphumela yokuhlolwa, udokotela udonsela ukunaka hhayi kuphela esibalweni samangqamuzana egazi abomvu namangqamuzana amhlophe egazi, kodwa futhi ne-cholesterol ephelele. Le nto enjengamafutha idlala indima yengxenye eqinisa ama-membrane amaseli, ikhulisa ukumelana komzimba kwamagciwane namagciwane.
Ama-cholesterol amaningi akhiqizwa isibindi, amathumbu nezinye izitho zangaphakathi. Umuntu uthola into encane kakhulu ngokudla. Ukwenza isimo sibe ngokwejwayelekile, kunconywa ukunamathela ekudleni okhethekile. Uma lezi zinyathelo zingasizi, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kukhonjisiwe.
Ngaphezu kwesenzo sokubopha, into efana namafutha iyadingeka ekuhlanganiseni kwama-owesifazane nawesifazane, kanye nokulawulwa kokuqina kokuqina kwamangqamuzana. Ibuye ibambe iqhaza ekwenziweni kwama-bile acid, ithuthukisa ikhwalithi yokusebenza kwendlela yokugaya ukudla.
I-cholesterol ihanjiswa ngamaprotheni akhethekile, ngokuya ngalokhu, amaqembu amathathu wezinto ahlukaniswa. Ama-lipoproteins aphansi (i-low-density lipoproteins (LDL)) agcwele ingozi, ahanjiswa ngohlelo lokujikeleza umzimba futhi acasule ukwakheka kwezigcawu ze-atherosclerotic odongeni lwemithambo yegazi nemithambo yegazi.
Ukwanda kwesikhombi se-cholesterol embi kubangela izifo zenhliziyo ezinkulu, kusongela ngezifo:
Ngala ma-pathologies, i-cholesterol ifinyelela ezingeni le-7.7 no-7.8 mmol / l.
Lapho i-cholesterol 7 nangaphezulu ilungisiwe, kungukungaphezulu kokujwayelekile kokujwayelekile. Inkinga kufanele ifunwe ekusebenzeni kahle komzimba. Akunakwenzeka ukufeza izinga elinjalo lezinto ezinomsoco ongafanele.I-cholesterol kusuka ku-7 kuye ku-8 iyimpawu ezesabekayo.
Ama-high density lipoproteins (HDL) nawo aqhelelene, abizwa nge-cholesterol enhle. Umuthi ubonakaliswa ngendlela enobungozi kufakwe kumathafa e-atherosulinotic, ubuyisela i-cholesterol eyingozi esibindini, bese uyasebenza.
Kunama-lipoprotein aphansi kakhulu (VLDL), aqukethe ama-triglycerides amaningi kakhulu kanye ne-cholesterol. Ngokwanda kwalesi sakhi, kutholakala ukwephulwa okungathi sína kwe-lipid metabolism, kuhambisane nezifo zohlelo lwethambo nenhliziyo.
Izimbangela ze-High Cholesterol
Imfuneko ye-cholesterol ephezulu ithathwa njengokuphambi kofuzo. Ngokuphazamiseka okunjalo kokuzalwa, izinga lezinto ezinjengamafutha lifinyelela ezingeni le-7.6-7.9, noma ngabe indoda noma umfazi mdala kangakanani. Izindlela zanoma yimuphi unyaka zingatholakala etafuleni.
Esinye isizathu kuzoba ukungondleki, okuqukethwe kwamanani amaningi ezilwane namafutha we-trans. Kwezinye izimo, ukudla okuhlose ukuguqula inkomba ye-cholesterol kungasithinta kabi isimo sempilo.
Esinye isizathu yindlela yokuphila engalungile, umsebenzi wokuhlala phansi. Ngaphandle komzimba osezingeni eliphezulu, izicubu zenhliziyo zigcwele ngamafutha, ukusebenza kwawo kuyaphazamiseka. Ukugeleza kwegazi okunciphile kusheshisa ukuvela kwama-plaque odongeni lwemithambo yegazi.
Uhlu lwezimbangela ze-cholesterol ephezulu lubandakanya ukukhuluphala ngokweqile. Abantu abanesifo sikashukela abanesisindo esikhulu somzimba bathambekele kakhulu ekwandeni kwento, ngoba umthwalo osenhliziyweni uyanda, i-myocardium isebenza ngokugqoka, futhi izicubu ziba buthaka kancane kancane.
Njengomphumela wesimo se-pathological, ukushaya kwenhliziyo kokuqala, imivimbo kwenzeka. Kulokhu, inkomba ephakathi ye-lipid isuka kumaphuzu ayi-7 kuye kwayi-8.
Imikhuba emibi kufanele futhi ifaniswe nezimbangela zenkinga; ukubhema nokuphuza utshwala kuthinteka kabi ekukhiqizweni kwamaseli e-cholesterol ephezulu.
Ngaphansi kwethonya lesifo sikashukela i-mellitus, i-cirrhosis yesibindi, kanye nokungasebenzi kahle kohlelo lwe-endocrine, cholesterol isuka ku-7.2-7.3 iye ku-7.4-7.5 mmol / l. Ukuqinisekisa ukutholwa, kukhonjiswa ukuthi kusetshenzelwa iqoqo lezinqubo zokuxilonga, kuzoqinisekisa noma kuphike ukwesaba.
Isiguli sizodinga ukunikela ngegazi ukuze kwenziwe ucwaningo, kunemithetho eminingana yokuthatha izivivinyo. Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kwenqubo bayenqaba ukudla okunamafutha okuvela kwimvelaphi yezilwane, sikhuluma ngalokhu:
Isikhathi sokugcina bengadli ngaphambi kwamahora ayi-12 ngaphambi kokuqoqwa kwezinto eziphilayo. Kungcono kakhulu ukuphuza amanzi ahlanzekile angenawo igesi ngaphambi kwenqubo. Ukunikela ngegazi kufanele kube engxenyeni yokuqala yosuku, mhlawumbe ekuseni.
Ukulandela izincomo, akukho kungabaza ngokunemba kwemininingwane etholakele. Kodwa-ke, uma ukhomba umphumela we-7 nangaphezulu, udinga ukwenza isifundo okungenani kanye.
Lapho izivivinyo eziphindaphindwayo ziqinisekisa umphumela, ngokushesha aqala ukwelashwa.
Yiliphi izinga elikhulayo lama-lipoprotein
Lapho ukuhlaziya kukhombisa amaphuzu ayi-7, isiguli siqala ukukhathazeka ngalokhu, asazi ukuthi isimo se-pathological sizophendukela ini. Udokotela uvame ukunquma ukwelashwa ngokwahlukana, ebheka izimbangela zokwephulwa.
Imiphumela yokungasinaki lesi sifo yizifo zezinso, amathumbu, izifo zenhliziyo ezi-coronary, izinto ze-atherosclerotic ezingxenyeni ezahlukahlukene zemikhumbi nemithambo yegazi.
Noma imiphi imiphumela ibulala ngendlela ebabazekayo, zonke izindlela eziphathelene nokujwayelekile kwama-lipoprotein aphansi ziyadingeka ngokuphuthumayo. Ngisho namakhulu amakhudlwana enkomba yento, isibonelo, 7.20, 7.25, 7.35 mmol / l, ayabhekwa.
Imithi nokudla okulinganiselwe kubekelwa ukunciphisa i-cholesterol.
Ngokulashwa kwezidakamizwa, impi yokulwa nento esezingeni eliphansi inikezwa yilezo zidakamizwa:
cholesterol ukumunca inhibitors.
Atorvastatin, amaphilisi eLovastatin aba ngama-statins athandwayo. Basebenza ngomgomo wokuvimba ama-enzyme athile abhekene nokukhiqizwa kwe-cholesterol. Ngenxa yalokho, ngemuva kwenkambo yokwelashwa, amazinga we-lipoprotein ancipha ngokushelela, isiguli sizwa ukuthuthuka okukhulu enhlalakahleni.
Kumele kwaziwe ukuthi ukukhulelwa kungukuphikisana nokusetshenziswa kwezidakamizwa zaleli qembu. Ngokuqondene nemithamo, ikhethwe ngawodwana.
Izindwangu ezisetshenziswa kakhulu yi-gemfibrozil, fenofibrat. Le mishanguzo isebenza yodwa, njengama-statins, kepha ilungele kakhulu ukuvimbela ukuphinde ibuye. Ukusetshenziswa kwama-fibrate kunesizathu sokuphambuka okuncane kusuka ezingeni elijwayelekile lezinto zegazi.
Ama-cholesterol ukumunwa kwe-cholesterol inhibitors Cholestyramine, iColextran isiza ukulungisa inkomba yezinto ezinamafutha aphelele futhi aphansi njengamafutha. Azisetshenziswa ngokuzimela, zinconywa njengengxenye yokwelapha okuyinkimbinkimbi kanye nama-statins noma ama-fibrate.
Ama-inhibitors asetshenzayo ahlukile kancane kunomuthi ongenhla, awavimbi ama-enzyme, kepha amise ngamandla ukufakwa kwamafutha. Ukusetshenziswa kwama-inhibitors kungenzeka nge-cholesterol engaphakeme kune-7.4 mmol / L. Ngamanani aphezulu, ukusebenza kahle kokwelashwa kuncishiswa kaningana.
Izindlela ezihlukile zokwehlisa i-cholesterol zisiza ukwandisa ukusebenza kwenkambo yokwelashwa. Ungenza amakhambi asuselwa ezitshalweni zokwelapha uwedwa ekhaya.
Kungani kukhuphuka i-cholesterol echazwe kuvidiyo kulesi sihloko.
I-cholesterol yegazi 7 no-3 - okufanele ukwenze nokuthi yini eyingozi kuyinkomba
I-Cholesterol - isakhi sokwakha amaseli: izinga elamukelekayo
Uyini ubungozi be-cholesterol ephezulu
Ungayibona kanjani i-cholesterol ephezulu
Izidakamizwa ezisehlisa ze-cholesterol
Izithako eziwusizo zokwehlisa i-cholesterol
Akufanele wenze ngokwejwayelekile futhi ubeke ilebula ku-"cholesterol" yokubekezela, ibeka ingozi yayo yomzimba ngokuphelele. Iphuzu ubukhulu bayo. Kuqhathaniswa nomuthi, ngaphandle kwalokho isiguli singenakukwenza, kepha umthamo owedlulele ungaba yingozi empilweni.
Uma i-cholesterol ingu-7.3 mmol / L, ingabe leli zinga liyingozi noma li-alamu yamanga. Ukuphendula lo mbuzo, kuyadingeka ukubhekana namazinga amisiwe lapho kungafanele ukwethuka.
Ngamagama alula, i-cholesterol yinto efana namafutha ebandakanyeka ekwakhiweni kwamaseli, ihlanganisa amavithamini, ibamba iqhaza ekusebenzeni kwe-metabolism, kanye nokukhiqizwa kwamahomoni ocansi. Ukuze umzimba uhlinzekwe ngalezi zinto zokwakha, kufinyelela kuma-80% awo okhiqizwa isibindi, amathumbu, izidakamizwa ze-adrenal, ama-gonads, ukuphumula umuntu akuthola ngokudla.
Ukuqonda ukuthi ngabe i-cholesterol ephelele eyi-7.3 mmol / l iyingozi empilweni, siphendukela ezindinganisweni:
Kumuntu oneminyaka engu-25 ubudala - 4.6 mmol / l,
Kwabesifazane abaneminyaka engama-40-50 ubudala - 6.6 mmol / l,
Amadoda avela eminyakeni engama-40 ubudala - 6.7 mmol / L,
Abesifazane abaneminyaka engama-60 ubudala - 7.7 mmol / l.
Kunemibandela enemininingwane eminingi yokuqukethwe kwe- “good” (HDL) cholesterol ne- “bad” (LDL), ngokuya ngeminyaka nobulili, ngakho-ke, esimweni ngasinye, kufanele uthintane nodokotela wakho.
Ukuma okujwayelekile, ungathatha njengesisekelo izincomo ezisemthethweni ze-European Society of Atherossteosis:
I-cholesterol ephelele - 5.2 mmol / l,
I-density lipoprotein cholesterol ephansi (LDL) - 3-3.5 mmol / L,
I-high density lipoprotein cholesterol (HDL) - 1.0 mmol / L.
Ngokusekelwe kokushiwo ngaphambili, i-cholesterol 7.3 mmol / L ibonakala iphakeme kakhulu. Kodwa-ke, uma sikhuluma ngezinga elijwayelekile labesifazane abaneminyaka engaphezu kwengama-60 ubudala, khona-ke ayikho indawo yokwesaba. Futhi uma inkomba enjalo itholakala enganeni, kowesilisa noma kowesifazane osemncane, khona-ke lolu uphawu olunzima ngesidingo sokwenza okuthile.
Zombili lezi zinhlobo ze-cholesterol ziyinkimbinkimbi yezakhi zama-protein-protein, lezi zinto ezinjengamafutha ziyasakazeka ngohlelo lokujikeleza. Kusukela lapho inani le-LDL lenyuka, bakha ama-seals (ama-plaque), okubangela ukuqina kwamathambo (i-atherossteosis).
Uma umsebenzi we-cholesterol "embi" ukhuphuka, lokhu kuthinta ukwakheka kwama-plaque, ukubonakala kwenqwaba yemicu lapho i-calcium ihlala khona.
Imithambo evaleleke ngamachashazi ibe mncane futhi ingabi namandla okuqina, kuyabonakala ukuthi i-stenosis iyabonakala. Igazi eligcwele umoya-mpilo alifinyeleli enhliziyweni. Kunobuhlungu, okuwuphawu lwe-angina pectoris, ukushaya kwenhliziyo kungenzeka - i-myocardial infarction.
Ingubo yegazi ingavela ngaphakathi emthanjeni uma kuqhuma ungazinza. Kuvimbela ukuhamba kwegazi futhi kube nokuhlaselwa yinhliziyo noma unhlangothi.
Akuwona njalo umzimba wethu okwazi ukuphendula ngesikhathi ku-cholesterol ephezulu, ngokwesibonelo, u-7.3 mmol / l noma ngaphezulu kumuntu. Kuphela lapho esevele enze "isenzo sakhe esingcolile": imikhumbi iba ntekenteke futhi incishiswe ngangokunokwenzeka, izimpawu zesifo esibangelwa i-cholesterol eyeqile ziqala ukuvela.
Izimpawu ezihlaba umxhwele kakhulu yilezi:
Ubuhlungu besifuba (i-angina pectoris),
I-Charcot's syndrome (ukuhlangana kancane),
Ezungeze izinkophe, kufakwa amadonsela omlenze ophansi nangaphansi kwezinye izindawo kwesikhumba.
Ukwelashwa ngezidakamizwa kufanele kubhekiselwe kukho uma izinga le-cholesterol libucayi futhi lidlula kakhulu i-7.3, futhi lize lidlulele ngaphezulu kwe-10. Nokho, ukuphuza umuthi awusisusi isimo esiyinhloko - ukulonda impilo enempilo.
Izidakamizwa ezibalulekile ze-cholesterol ephezulu:
Statins (flavustatin, lovastatin, cerivastatin). Kwesinye isikhathi isenzo sabo singehlisa i-cholesterol yegazi izikhathi ezingaphezu kwezingu-2,
I-Fibroic acid (Tricor, Lopid, Atromed-S) isiza ukusheshisa i-oxidation yamafutha acid,
I-Colestid ne-Questran yizidakamizwa ezihlangana ne-bile acid, ebambezela umsebenzi wokuzala kwe-cholesterol.
Ukwelashwa kwezifo okubangelwa i-cholesterol ephezulu, lapho izinga layo liphakama ngaphezu kwe-7.3, kufanele kusondele ngokuphelele.
Indlela yokuphila esebenzayo, ukuyeka imikhuba emibi futhi udle nemithi kumele inezelwe ngezithasiselo ezikhethekile ezilusizo:
Vitamin E - i-antioxidant enamandla kunazo zonke evimba ukubukeka kwamagceke e-cholesterol,
I-Omega-3 - itholakala emafutheni enhlanzi, iyi-ejenti enamandla yokulwa nokuvuvukala, ivimbela ukuvela kweziqalo zegazi, futhi inciphise ukuvela kwe-atherosclerosis. Ibuye ibe yingxenye ye-flaxseed, i-primrose kanye ne-oyela esidlwenguliwe,
Itiye eliluhlaza yi-antioxidant ethuthukisa i-lipid metabolism, ibangele amazinga e-cholesterol ukuthi anciphe.
Igazi le-Garlic liquefies, lilwa kahle nokwakheka kwezihibe zegazi. I-Aliin (amakhompiyutha wesibabule), okuyingxenye yegalikhi, inezici zokuphulukisa ezingenakuphikwa ezisehlisa i-cholesterol,
Amaphrotheni eSoy aqukethe i-genistein - i-antioxidant enamandla, ivimbela okokukhipha i-oxidation ye-LDL, isebenze ekukhusekeni kwama-bile acids,
I-Niacin (Vitamin B3) ihlanganisa acid acid, esiza ukunciphisa ama-triglycerides,
I-Folic acid (B12 ne-B6) yehlisa izinga le-homocystine, ebangela ubunzima benhliziyo. Ngokushoda kwala mavithamini, ubungozi besifo senhliziyo ne-atherosclerosis luyanda.
Kubaluleke kakhulu ukuthola inkinga ngesikhathi, funa usizo lukadokotela bese ulandela yonke imiyalo. Okungcono nokho, yeka imikhuba emibi, udle ukudla okunempilo futhi uhlolwe njalo ngonyango.
Uyini umkhuba we-cholesterol egazini
Emhlabeni wanamuhla, cishe akukho bantu abangakaze bezwe nge-cholesterol. Kodwa-ke, akuyena wonke umuntu owayekwazi ukuqonda ngokuphelele ukuthi luhlobo luni lwento. Kepha le ngxenye idlala indima enkulu ekwakhiweni kwezifo eziningi zenhliziyo, i-endocrine pathologies, izifo zezinso nezinso. Ukuze usondele ngokuqondile ekwelashweni, udokotela kufanele azi ukuthi iliphi inani le-cholesterol okufanele libe segazini labantu beminyaka ehlukahlukene. Futhi ezigulini eziqapha impilo yazo, lolu lwazi luzosiza ekutholeni ukuphambuka ngesikhathi bese lufuna usizo kw uchwepheshe.
Ngombono wamakhemikhali, i-cholesterol ingotshwala obunamafutha we-polyhydric oyingxenye yokwakheka kwezitho zamangqamuzana.
Ngamanye amagama, i-cholesterol isiza ukuqinisa amaseli, njengoba kunjengokungathi kungokwakhiwa kwezindonga zeseli zangaphandle nezangaphakathi. Ngaphezu kwalokho, i-cholesterol iyabandakanyeka:
ekwakhiweni kwama-bile acid
ukwakhiwa kuka-Vitamin D
ukwakheka kwama-hormone ocansi
ukwehlukaniswa kwemizwa ye-nerve
Egazini, i-cholesterol ivela ekudleni (cishe i-20%), kanti ingxenye eyinhloko yenziwa isibindi (ngaphezulu kwama-80%).
Sekufakazelwe ukuthi ikhwalithi yendlela yokugaya incike enanini lama-bile acid aqhekeza amafutha emathunjini, akuvimbele ukuthi angenwe egazini. Ngokuvamile, i-cholesterol iyisakhi esibalulekile, ngaphandle kwayo ukusebenza okuvamile kwazo zonke izinhlelo zomzimba akunakwenzeka.
I-cholesterol ayikwazi ukuncibilika emanzini, ngakho-ke ijikeleza ngamangqamuzana omzimba njengengxenye yama-lipoproteins noma amaprotheni ehlanganiswa. Izinga le-cholesterol egazini linqunywa yinhlanganisela yalezi zinhlanganisela. Lapho wenza ukuhlaziya kwamakhemikhali wezinto eziphilayo, izingxenye ezilandelayo ziyahlukaniswa:
i-cholesterol ephelele - wonke amafutha emzimbeni womuntu
triglycerides - izinto eziyinkimbinkimbi ezinamafutha ezitholakala ngokuyinhloko ku-plasma yegazi
density lipoproteins - ngendlela aboniswe ngayo yi-LDL. Indima yalezi zinto ukuthutha i-cholesterol kusuka kumaseli wesibindi ngokusebenzisa izicubu.
high density lipoproteins - isifinyezo njenge-HDL. Umsebenzi wabo ukudlulisa i-cholesterol eyeqile egazini namaseli abuyele esibindini ukuze kuqhutshekwe nawo
Izinkomba ze-cholesterol egazini kuyinto ejwayelekile yezingxenyana eziqukethwe ibhalansi ethile.
I-cholesterol “imbi” futhi “yinhle”
Isimo se-cholesterol esegazini yisilinganiso esisele phakathi kwawo wonke izingxenyana zamafutha. Kodwa kwenzeka ukuthi uhlobo "olubi" lwe-cholesterol luqale ukuqoqana emzimbeni, lubhubhise imithambo yegazi namaseli wezicubu.
"Kubi" cholesterol yile:
I-LDL - ama-lipoprotein aphansi wesisindo esingangena odongeni lwe-vascular bese akha amaprotheni e-cholesterol
Ama-Triglycerides - ayizinqolobane zamafutha futhi uma kwenzeka ukuqhekeka kwama-molecule akhulisa kakhulu ukuhlushwa kwe-cholesterol
I-cholesterol “enhle” yi-HDL noma ama-lipoprotein aphezulu. Bahlanza imithambo yegazi ne-plasma ngokuhambisa i-cholesterol yamahhala esibindini, lapho belahlwa khona.
Izimbangela zokushintsha kokuhlushwa kwe-cholesterol
Izindinganiso ezamukelwa ngokuvamile ze-cholesterol embi nokuhle egazini zinemibandela, ngoba ukushintshashintsha kwezakhi zegazi kuncike ezintweni eziningi:
Ubulili - abesifazane abaneminyaka engama-50 ubudala banezinga eliphansi, ngokungafani nabesilisa abaneminyaka efanayo. Lokhu kungenxa yokuba khona kwe-estrogen (ama-hormone ocansi) avikela umzimba wesifazane. Ngemuva kokunqamuka kokuya esikhathini, kukhuphuka i-cholesterol yegazi labesifazane
Ubudala - ezinganeni, inani le-cholesterol liphansi kunabantu abadala. Ukwanda okubonwa ngeminyaka
Imikhuba emibi - ukusebenzisa kabi ukubhema kubhubhisa izindonga zemithambo yegazi futhi kuthinta nesibindi kabi. Lokhu kuthuthukisa ukukhiqizwa okukhudlwana kwe-cholesterol "embi", ebekwe ezindongeni ezihlangene zempi.
Umlutha wokudla okunamafutha nokudla okusheshayo
Ukuba khona kwezifo ezingama-systemic nezingamahlalakhona. Ukwanda kwe-cholesterol “ngumlingani” wesifo sikashukela, isifo se-endocrine, izifo zesibindi nezinso, kanye ne-hypercholesterolemia eyindlalifa.
Ukuqongezwa okwandayo kwe-cholesterol ephelele kuyenzeka kwabesifazane abakhulelwe. Lokhu akuyona i-pathology, ngoba amafutha adingekayo ukuze kuthuthukiswe i-placenta nomzimba wengane okhulayo.
Ingozi ye-hypercholesterolemia lapho ingekho khona ukwelashwa ukwakheka kwama-plaque anciphisa ukukhanyisa kwemithambo yegazi. Ngokuhamba kwesikhathi, ukuqhuma kwama-plaque nokuqhekeka kwegazi kusendaweni yazo. Ngokuhamba kwegazi okuvinjelwe, izicubu nezitho zomzimba ziqala ukuhlushwa i-ischemia. Kwezinye izimo, kusuka kwengubo yegazi ngaphansi kwethonya lomfutho wegazi, i-emboli iyavela. Ukuhamba ngokugobhoza kwegazi, i-embolus ibambeka esikebheni esincane, siyivale bese kuholela ezifweni ezibulalayo ezinjengokushayeka okungazelelwe noma ukushaya kwenhliziyo.
I-Hypocholesterolemia yisimo esiyivelakancane lapho umzimba uswele izinto ze-cholesterol. Izimbangela zalesi sifo sibizwa ngokuthi yizinkinga zesibindi noma ukukhathala okukhulu okubangelwa ukubulawa yindlala isikhathi eside ngemuva kokuphazamiseka kwengqondo. I-cholesterol ephansi, njenge-cholesterol ephezulu, ibeka usongo empilweni.
Ochwepheshe bezokwelapha bavame ukwehlukanisa phakathi kokujwayelekile kwe-cholesterol ngeminyaka. Ososayensi bathole ukuthi lapho umuntu esegugile umuntu, kuyanda ukukhiqizwa kwe-cholesterol. Kodwa lokhu akuhlotshaniswa nanoma yiziphi izifo, njengoba iminyaka idlula, izinqubo ze-metabolic ziyaguquka, futhi leli qiniso lithinta ukwakheka kwegazi.
Izinga le-cholesterol ephelele etafuleni legazi
Iminyaka mmol⁄ ilitha
Kufika eminyakeni emi-5 ‹2,99—5,25›
Iminyaka engama-6- 10 ‹3,14—5,25›
Iminyaka eyi-11-15 ‹3,7—5,23›
16-16 iminyaka ‹2,92—5,10›
Iminyaka engama-21-25 ‹3,17—5,59›
Iminyaka engama-26-30 ubudala ‹3,43—6,32›
Iminyaka engama-31- 35 ‹3,56—6,58›
Iminyaka engama-36- 40 ‹3,64—6,99›
Iminyaka engama-41-45 ‹3,93—6,94›
Iminyaka engama-46-50 ‹4,07—7,15›
Eminyakeni engu-51-55 ubudala ‹4,10—7,17›
Iminyaka engama-56-60 ‹4,05—7,15›
Iminyaka engama-61-65 ubudala ‹4,13—7,15›
Iminyaka engama-66-70 ubudala ‹4,08—7,10›
Ngemuva kweminyaka engama-70 ‹3,74—6,86›
Izinga elijwayelekile le-cholesterol esegazini lomuntu ophilile kufanele ligcinwe ngaphakathi kwe-5.29-6.29 mmol / lit. Ukuphambuka kusuka kokujwayelekile kuye ngezinga elikhulu noma elincane kukhombisa ubukhona "bokungasebenzi kahle" ekusebenzeni kwezitho zangaphakathi.
Iya etafuleni lokuqukethwe
Ukwanda kwe-cholesterol ngobudala kwabesifazane kungenxa yezinguquko ze-hormonal. Izinkomba azishintshi kuphela ngesikhathi sokuya esikhathini, kodwa futhi nangesikhathi sokukhulelwa.
Izinga le-cholesterol egazini: itafula ngeminyaka yabesifazane
Emncane, zonke izinqubo ze-metabolic emzimbeni wesifazane zenzeka ngokushesha, ukudla kungenwa kangcono, futhi amafutha ngokweqile aqedwa ngokwemvelo. Ngakho-ke, ngisho nokuba khona kwemikhuba emibi kuvumela i-cholesterol ukuthi ihlale ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile. Kodwa-ke, lapho kukhona ama-endocrine pathologies, isifo sikashukela kanye nokwehluleka kwesibindi, i-cholesterol ingandiswa ngamayunithi amaningana ngisho esemncane.
Abesifazane abaningi ngemuva kweminyaka engama-30 kufanele bazi ukuthi liyini izinga le-cholesterol egazini, ngoba kungale minyaka lapho izinqubo ze-metabolic ziqala ukwehla, futhi nethuba le-hypercholesterolemia liyanda. Iqembu lengozi ngokuyinhloko lifaka ukubhema kwabesifazane nokudla izidakamizwa ze-hormonal. Kulesi sikhathi, kubalulekile ukuqala ukulawula izondlamzimba, njengoba umzimba unzima kakhulu ukubhekana nokudla okusindayo.
Ngemuva kweminyaka engama-40, ngokusondela esikhathini sokuya esikhathini, inani le-estrogen emzimbeni wesifazane lehliswa kakhulu. Lokhu kuholela ekukhuleni kwe-cholesterol. Le nqubo ayinakugwemeka, ngoba kuthathwa njengokujwayelekile komzimba.
Eminyakeni engu-50 nangaphezulu, kunconywa ukuthi kubhekwe umsoco. Kuyaluleka ukuthi ukudla kwansuku zonke kwabesifazane kufaka amafutha amancane ezilwane nokudla kwezitshalo okuningi ngangokunokwenzeka. Ngaphezu kwalokho, kufanele uyeke ukubhema, utshwala bese uzama ukunyakaza ngangokunokwenzeka.
I-cholesterol yegazi: okwejwayelekile emadodeni
Emadodeni, ngokungafani nabesifazane, umzimba awuvikelekile ngama-hormone ocansi. Kakade besebancane, odokotela balule abantu bobulili obuthakathaka ukuthi baqaphe impilo yabo. Amadoda aseminyakeni ephakathi nendawo asevele ethambekele ekukhuliseni i-atherossteosis, ukuvela kwemivimbo kanye nokuhlaselwa yinhliziyo.
Amatafula akhombisa ukuthi iyiphi i-cholesterol egazini, okujwayelekile kumadoda nabesifazane abadala kuhlukile. Ezocansini ezibuthakathaka, ikholesterol ikhuphuka ngokuhamba kweminyaka, futhi emadodeni ngemuva kweminyaka engama-50, iqala ukuncipha.
Izimpawu ze-hypercholesterolemia zivame ukubonakaliswa emadodeni ngesimo se:
ukwakheka kwamafutha esikhunjeni
ukushesha komoya ngokuzivocavoca okuncane komzimba
Ukwazi ukuthi yini i-cholesterol yegazi okufanele ibe yiyo futhi uthathe izinyathelo zokuyilungisa, awunakukwazi nokuba nezifo ezingamahlalakhona lapho usumdala, uzizwe ugcwele amandla kanye nokuqina kwemizwa.
Umuntu onquma ukuthola izinga lakhe le-cholesterol okokuqala kwanele ukusungula inkomba ejwayelekile. Uma izinombolo ekuhlaziyweni zizohluka kakhulu kokujwayelekile, kungakuhle ukuthumela igazi kuphrofayili ye-lipid. Inani lezingxenyana ze-cholesterol lizosiza ekutholeni ngokunembile imbangela yezinguquko ze-pathological.
Izinga le-cholesterol egazini lomuntu linqunywa kusetshenziswa ukuhlolwa kwegazi kwelebhu. Kuyadingeka ukuthi uvakashele elebhu ekuseni, esiswini esingenalutho. Ngaphambi kwenqubo (izinsuku ezimbili kuya kwezintathu), amakhambi, ezemidlalo, utshwala nokudla okunamafutha awafakiwe. Kuyelulekwa ukuyeka ukubhema (ikakhulukazi ngosuku lokunikela ngegazi).
Imiphumela yephrofayili ye-lipid izokhombisa inani le-cholesterol "enhle" ne "embi", futhi ikhombise izinga le-triglycerides.Uma i-LDL ingaphezulu kuka-4,99 mmol / ilitha - isiguli sinengcuphe yokuthola izifo zezifo ezi-coronary.
Lapho i-HDL ingaphezulu kuka-5.99 mmol / litre, isiguli akufanele sikhathazeke. Lokhu kusikisela ukuthi i-cholesterol "enhle" icindezela ama-molecule "amabi", ewahambisa emthanjeni wethambo. Kodwa-ke, izinkomba ezingaphansi kuka-2.99 mmol / ilitha zibonisa izinguquko emzimbeni.
Ukuze uthole decryption enembe kakhudlwana, isiguli sinconyelwa ukubonana nodokotela. Uzokutshela kahle ukuthi ingakanani i-cholesterol yomuntu esegazini nokuthi yiziphi izindlela okudingeka zithathwe ukuyilungisa.
Ukwehlisa i-cholesterol egazini labesifazane kuhlobene nokuphulwa kohlelo lwezinzwa noma ukungondleki kahle.
Kungani ulinganise i-cholesterol
I-cholesterol ngotshwala obunamafutha asetshenziswa ngumzimba womuntu ukwakheka kwamavithamini D, amahomoni e-steroid, nokwakhiwa kwezakhi zesitho sokuqanjwa kwamangqamuzana. Cishe ama-75% we-sterol akhiwa ngumzimba, okusele kuvela ekudleni. Iningi layo yonke i-cholesterol yenziwa isibindi, ibanikeza ngawo wonke amaseli omzimba. Izindlala ze-adrenal, isikhumba namathumbu kukhiqiza i-sterol yezidingo zabo.
Ekuzalweni, zonke izingane zine-cholesterol ephansi. Kuze kube ebusheni, izinga lokunyuka kokuhlushwa licishe lifane kumantombazane nabafana. Konke kuguquka ngokuqala komjikelezo wokuya esikhathini. Umzimba wowesifazane uqala ukukhiqiza ama-hormone - ama-estrogens, angavumeli i-sterol ukuba ikhule. Umzimba wamadoda nawo ukhiqiza i-estrogen, kepha inani elincane kakhulu. Ngakho-ke, i-cholesterol yabo ikhula yonke impilo yabo. Kwabesifazane, izinga le-sterol lenyuka kuphela emva kokuqala kokuya esikhathini.
Kwabesilisa, i-cholesterol engu-7.1-7.2 mmol / L yinto ejwayelekile ukusuka eminyakeni engama-45; kwabesifazane, i-cholesterol engu-7.3-7.4 mmol / L ithathwa njengejwayelekile ngemuva kweminyaka engama-50. Umzimba wabesifazane abakhulelwe uhlanganisa i-cholesterol eningi kunokujwayelekile. Ngakho-ke, inkomba ye-cholesterol ye-7.7-7.8 mmol / l ijwayelekile ekupheleni kwe-trimester yesibili. Ngaphambi kokuzalwa kwengane, ingakhuphuka ifike ku-9 mmol / l.
Kunezizathu ezintathu zokuhlola amazinga we-cholesterol:
Ukuhlolwa kokuzivikela. Ugcinelwe izingane ezineminyaka engama-9-9, bese kuba ngu-17-21, abantu abadala njalo ngeminyaka eyi-4-6. Kuyadingeka ekutholweni kwezifo okufika ngesikhathi, isinqumo somuntu ekwakhekeni kwezifo zenhliziyo,
Ukuxilongwa okuyisisekelo. Ikuvumela ukuthi ucacise ukutholakala kokutholwa kokuqala, kanye nokucacisa izinga lokuthuthuka kwalesi sifo,
Ukuqapha isimo seziguli ezinamazinga aphezulu we-sterol. Inika udokotela ithuba lokuqapha isimo sezempilo sesiguli, ahlole ukusebenza ngempumelelo kwendlela enqunyelwe.
Kungani i-cholesterol ephezulu iyingozi
I-cholesterol ephakeme (i-hypercholesterolemia) iyinto ebeka engcupheni ukuthuthukiswa kwe-atherossteosis, uphawu lwelabhoratri lezifo ezithile. Uma okuqukethwe kwe-sterol yegazi kuphakeme, kuqala ukuhlala ezindongeni zemikhumbi eyonakele. Lokhu kuqala ukwakhiwa kwamakhemikhali e-cholesterol.
Kuqala, zinokubonakala kwamabala, amafutha, imichilo, okungaphazamisi ukusebenza kohlelo lokujikeleza kwegazi. Kodwa-ke, ukukhula kwamachweba kuhambisana nokuncipha kokhilimu wemithambo, okuholele ekuvinjelweni komkhumbi. Isitho okuhlinzekelwe ngaso igazi elithathwe yi-artery siyayeka ukuthola isilinganiso esanele se-oksijini nezakhi zomzimba. Ama-atherossteotic plaque angavela, avale umkhumbi.
Inethiwekhi yemithambo yenhliziyo yethu ayithembeki kakhulu. Iseli ngalinye lomsipha wenhliziyo londliwa ngumkhumbi owodwa kuphela. Lapho ukukhanya kolwelwesi emthanjeni kuhlangana, i-cardiomyocyte iyantuleka komoya-mpilo. Lesi simo sibizwa ngokuthi isifo senhliziyo.. Kodwa uma i-lumen ye-artery ye-coronary ivinjiwe ngokuphelele, amanye amaseli alahlekelwa ngumsoco futhi afe - i-myocardial infarction iba.
Amangqamuzana obuchopho adla emikhunjini eminingana. Kodwa-ke, zifuna kakhulu ikhwalithi yokunikezwa kwegazi.Ukuntuleka komoya-mpilo kukhuthaza ukukhula kwesifo sobuchopho be-ischemic, okuyinkinga enkulu kunazo zonke okuyi-stroke.
Lapho i-atherossteosis ithinta imithambo emikhulu yemilenze, ukondleka kwezicubu zomzimba kuyaphazamiseka. Isikhumba siba buthuntu, amanxeba aphola kahle. Iziguli zizwa izinhlungu ezinzima lapho zihamba. Okudida kakhulu yi-gangrene yezinyawo, edinga ukunqunywa kwelungu. Isikhathi esiningi, uhlobo olunganakwa lwalesi sifo lubonwa ezigulini ezinesifo sikashukela.
Ngaphezulu, sithole ukuthi kungani amazinga e-cholesterol engafani nabesilisa, abesifazane, izingane, abasha, abantu asebekhulile. Isibonelo, i-cholesterol ka-7.5 mmol / L iyinkomba ejwayelekile kwabesifazane ngemuva kweminyaka engama-55, kodwa ayemukeleki entombazaneni encane. Ngakho-ke, ukucutshungulwa kuqala ngokuchazwa kwesejwayelekile.
Inketho enhle ukuthola amazinga avela elabhoratri elenza ukuhlaziya. Lezi kuzoba yizibalo ezinemba kakhulu ezibonisa imininingwane yokuhlola amazinga we-cholesterol kulesi sikhungo. Kodwa-ke, ukuqonda okujwayelekile kungatholakala ngokufunda itafula elijwayelekile.
Ithebula. I-cholesterol ejwayelekile ezinganeni, abesifazane, emadodeni.
Ake sithi i-cholesterol yakho ingu-7.6 mmol / L. Uyintombazane encane engakhulelwe eneminyaka engama-30. Okujwayelekile kulonyaka kubhekwa njengesinkomba se-3.32-5.75 mmol / L. Ngokuhambisana nalokho, izinga le-cholesterol lika-7.6 mmol / L lidlula umkhawulo ophezulu ojwayelekile ngo-32%. Lokhu kuphambuka okuncane, okungahle kuhambisane nokungondleki, ukubhema, ukusetshenziswa kabi kotshwala ngokweqile, ngokweqile. Uma uthatha izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo, ukwandisa izinga le-sterol kungaba ngumphumela omuhle wokuthatha imishanguzo.
Abantu abaningi abane-cholesterol ephezulu ngokwabo bavusa ukuthuthukiswa kwe-atherosulinosis. Phakathi kwezizathu ezivame kakhulu:
Ukudla okuqukethe amafutha amaningi, i-cholesterol, ukuntuleka kwefayibhu,
Futhi, i-cholesterol ephezulu imvamisa ingumphumela wesifo sikashukela, ukuntuleka kwe-yegilo. Izimbangela ezinkulu ukuntuleka kwe-hormone yokukhula, izifo zesibindi, kanye nokuphazamiseka kwezicubu ze-bile.
I-United States National Institute of Health and Medicine incoma ukuthi bonke abantu abane-cholesterol engu-7.5 mmol / L noma ngaphezulu bahlolwe izifo zofuzo: i-heterozygous, i-homozygous hypercholesterolemia. Womabili la ma-pathologies ahambisana nokuphulwa kwe-cholesterol metabolism, izinga layo elihlala liphezulu, kungakhathalekile ukuthi kudliwani. Uhlobo olunzima kakhulu lwalesi sifo yi-homozygous hypercholesterolemia, njengoba ingane ithola uhlobo olunesici kubo bobabili abazali.
Ukwelashwa Okuphezulu Kwe-cholesterol
I-cholesterol 7.0-7.9 ayithathwa njengophawu oludinga ukwelashwa ngokushesha. Bazama ukwenza ngokwejwayelekile izinga le-sterol ngokulondolozwa: ngokuvuselela indlela yabo yokuphila nokudla. Inketho enhle:
Yekani ukubhema. Ukubhema kukhulisa i-sterol embi, ukwehlisa okuhle
Hambisa okuningi. Ngisho nokuhamba ngehora elilodwa kuzosiza ukufeza ukuthuthuka okubonakalayo enhlalakahleni. Ukuvivinya umzimba kwe-aerobic kukuvumela ukuthi uzuze imiphumela engcono. Ngakho-ke, kungakuhle ukuthi uvakashele ejimini, ugijime noma ugibele ibhayisekili okungenani izikhathi ezi-3 / isonto,
I-Alcohol - akuvamile, ezingxenyeni ezincane. Ukusetshenziswa kabi kotshwala kukhulisa umthwalo esibindini, kwandisa i-cholesterol,
Amafutha asikiwe (ingulube, inyama yenkomo, ushizi we-cottage shizi, ushizi, ukhilimu) - kaningana / isonto. Ukusetshenziswa njalo kwalokhu kudla kukhulisa i-cholesterol. Ngezinye izinsuku, nikeza imithombo yemifino yamafutha emifino - uwoyela, amantongomane, imbewu. Bacebile ngamafutha acid ezuzisayo.
Izinhlanzi ezinamafutha, ama-walnuts, ama-alimondi, imbewu yefilakisi - okungenani amahlandla ama-2 / isonto. Lokhu kudla kucebile ngama-asidi e-omega-3 fatty acid, abaluleke kakhulu ekusebenzeni kwenhliziyo okujwayelekile.Okuqukethwe okuphezulu kwe-omega-3 fatty acids kwehlisa zonke izinhlobo ze-cholesterol embi, kwandisa ukuqoqwa kokuhle,
1.5-2 amalitha amanzi ahlanzekile / ngosuku. Ukunikeza umzimba ngamanzi anele kusiza ekuvimbeleni ukwakheka kwe-sterol ngokweqile njengempendulo ekuphelisweni komzimba.
Ukwelashwa kwezifo ezingamahlalakhona ezihambisana ne-cholesterol ephezulu kuyingxenye ebalulekile yokwelashwa. Ukukhethwa kwezidakamizwa kuncike ohlotsheni lwe-pathology:
umfutho wegazi ophakeme - kulungiswa ukuqokwa kwezidakamizwa ezinciphisa umfutho wegazi,
izifo zokushoda kwama-hormone (isifo sikashukela i-mellitus, i-hypothyroidism, ukuntuleka kwe-somatostatin) - kufaka phakathi ukwethulwa kwama-hormone alahlekile esigulini,
i-pathologies yesibindi, imikhiqizo yebhiliary - idinga ukudla, ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezikhuthaza ukwenziwa kwe-bile, hepatoprotectors, antispasmodics. Amabhlogo amakhulu ahlonishwa ngokushesha.
Izidakamizwa ze-Hypolipidemic ezisehlisa i-cholesterol nezinye izingxenyana ze-lipid zibekelwe ukwehluleka kokudla, ushintsho lwendlela yokuphila, kanye nokwelashwa kwezifo ezingamahlalakhona. Imvamisa, iziguli zibekwa ama-statin anqunyiwe. Ngokungabekezeleli kwabo noma ukukhuphuka okuncane kwe-sterol - i-fibrate, amalungiselelo we-omega-3 fatty acid, i-cholesterolorporp inhibitors, abalandeli be-bile acid.
Kusho ukuthini inkomba 7-7.9
Ngamazinga we-cholesterol ngaphezulu kwe-7, unhlangothi kungenzeka
Ukufundwa kwe-cholesterol yegazi ngaphezulu kwe-6 kubhekwa njengokuphezulu futhi kudinga ukunciphisa ngokushesha. Izinkomba ezisezingeni 7 ziyisigaba sokuqala sokwakheka kwe-atherosulinosis.
Ezingeni le-7 kuya ku-7.9 mmol, uhlu olusha lwezifo luyanda:
I-atherossteosis ezindaweni ezahlukahlukene. Imvamisa, izinyawo zithinteka ngokuqhuma kwemithambo yegazi, nezindawo lapho kuhlangana khona igazi eliningi,
Ischemia yenhliziyo. Njengomphumela wokwakhiwa kwama blockages emithanjeni ye-coronary, ingozi yokuhlaselwa yisifo senhliziyo nemisipha yenhliziyo ikhuphuka,
Isifo sokuwa Ukuvela kwesifo sohlangothi ngokuvamile kubangelwa ukuphazamiseka kwe-cholesterol. Lokhu kwenzeka ikakhulukazi lapho kwanda khona ubungozi bokweqile.
Imvamisa, ngenxa ye-cholesterol ethe xaxa, kuvela isifo samathumbu, kuthi ukufa kwamathumbu kuqala. Ngenxa yalokhu, ukugaya kuhlushwa.
Ukwephulwa kokuhlinzekelwa kwegazi emikhawulweni engezansi. Lesi sifo senzeka ngenxa ye-atherosulinosis yomgudu wokuhlukanisa womkhumbi.
Uma kuvela uphawu olulodwa noma ngaphezulu, kuyadingeka ukunciphisa i-cholesterol kusuka ku-7 kuye ku-5 ngokushesha okukhulu.
Iqembu elisengozini yokugula lifaka bonke abantu abakhuluphele. Le nto ibhekwa njengebaluleke kakhulu. Kungukuqukethwe kwamafutha aphezulu emzimbeni okwakha izimo ezifanele zokwakheka kwe-atherosclerosis.
Abantu abahlushwa yizifo zohlelo lokuthinteka kwenhliziyo nabo abekho engcupheni. Ngobuthakathaka bemithambo yegazi nenhliziyo, ubungozi bezinye izifo bukhulu. Lokhu kungenxa yokuthi amasosha omzimba womuntu acekelwe phansi kakhulu.
Abesifazane abakhulelwe kufanele baphaphame ikakhulukazi. Amazinga we-cholesterol ngesikhathi sokukhulelwa angabikwa. Owesifazane kufanele aqaphe njalo izinqubo zemvelo zomzimba wakhe.
Njengoba kungenakwenzeka ukuthi uqaphele ukuba khona kwe-cholesterol ephezulu, kunconywa ukuthi ukuhlaziywa kwenziwe okungenani izikhathi eziyi-1-2 ngenyanga. Ngakho-ke, noma ushintsho oluncane ku-cholesterol lungabonakala, futhi kuzothathwa izinyathelo zokuqeda lesi sifo.
Kukhona inani elikhulu lezinto ezifaka zombili ezilindelekile nezitholwa ngenxa yendlela yokuphila.
Kuyaqabukela, kunokuqagelwa kofuzo. Ukuvela kwe-cholesterol ngaphezulu kophawu lwamamililitha ayi-7 ilitha ebuntwaneni kukhombisa ukudluliselwa kwalesi sifo kumzali oyedwa noma amabili.
Ukuthi umzimba udlani futhi nini futhi kubalulekile.Ukudla okungafanele, okweqile, noma okungafanele futhi kungadala i-cholesterol ephezulu.
Kumele kwaziwe ukuthi lokhu akusebenzi kuyo yonke imikhiqizo. Ukudla okunamafutha kuphela, amasoseji kanye namakhekhe kungafakwa ekudleni okungalungile.
Ukuntuleka komsebenzi kuholela ekuqongeleleni njalo kwe-cholesterol. Njengoba kungekho ndawo yokuchitha amandla etholwe ngokudla, iyanqwabelana. Inani le-lipoproteins ephansi liyenyuka futhi nezinga le-lipoprotein le-density ephezulu liyancipha, lokhu kuholela ku-atherossteosis.
Imvamisa isici sengozi sikhuluphele. Lokhu kuthuthukisa ukunqwabelana kwe-cholesterol eyeqile.
I-Alcohol kanye nokubhema kuvimbela ukukhiqizwa kwama-lipoprotein aphezulu kwabantu. Lokhu kufaka isandla ekwandiseni okusheshayo kwe-low density lipoprotein kanye nokwakheka kwe-vascular atherossteosis.
Ukwehla nokwenyuka kwezinga lama-lipoprotein emizweni ehlukahlukene kungabangelwa izifo ezingamahlalakhona. Ama-pathologies esistimu ye-endocrine kanye noshukela wezindlela ezahlukahlukene angenye yezifo ezimbalwa ezithinta ukulinganisela kwe-cholesterol engapheli.
Kungakhathalekile ukuthi yini ebangela ukuvela kwe-cholesterol, udokotela kumele enze ukuhlonza okugcwele kwalesi sifo. Ekwelashweni, kubalulekile ukususa imbangela yezimpawu, hhayi izimpawu.
Uma kunezinga eliphakeme le-cholesterol egazini - kusuka ku-7, kufanele uthintane nodokotela ngokushesha. Udokotela uzonquma indlela yokwelashwa nokuthi uluphi uhlobo lokwelashwa oluzobekwa phambili: ngokusebenzisa noma ngaphandle kwemithi.
Ukwelashwa kwezidakamizwa kusetshenziswa lapho izinga le-cholesterol lifinyelela endaweni ephezulu ye-7.7 m / mol
Ukwelashwa okungeyona yezidakamizwa
Uma kungenasidingo somuthi, kunqunywa inkambo ye-physiotherapy nokudla okuqinile.
Ukudla kuphezulu ngamaprotheni, i-fiber namafutha acid. Le ndlela yokwelapha ihlala isikhathi eside kakhulu kunomuthi, kepha imiphumela emibi ingagwenywa.
Ukudla kugcinwa ngokulandelayo:
Ukusuka ekudleni kuya kumthamo omncane, umkhiqizo oqukethe i-cholesterol ephezulu ayafakwa. Le mikhiqizo ngokuyinhloko ifaka: ibhotela nenyama enamafutha.
Kusetshenziswa inani elikhulu lama-greens. Imifino iqukethe i-fiber ebalulekile, enomthelela ekwenzeni ama-lipoprotein aphezulu kakhulu.
Ukuntuleka kwamagciwane wengcindezi. Le nto isebenza ekudleni. Njengoba, ngaphandle kokubheka ukuphumula kwengqondo, ukufakwa kwemikhiqizo akunangqondo.
Umthwalo wezemidlalo olandelwa ukudla kufanele ulinganise futhi kancane kancane. Izindleko zomzimba eziningi zingaqhakambisa noma ziveze izimpawu zezifo ezahlukahlukene.
Ukwelashwa kwezidakamizwa kusetshenziswa ezimweni lapho izinga le-cholesterol lidlula amamamilimitha angama-7,7 ilitha ngalinye. Ukungenelela okunjalo kuyadingeka ngenxa yesimo somzimba esiwohlokayo noma uma singekho isikhathi sokwelashwa isikhathi eside.
Phakathi kwezidakamizwa, kunamaqembu amathathu: ama-statin, ama-inhibitors kanye nama-fibrate.
Ama-figrate asetshenziselwa ukuzinzisa i-lipids ne-cholesterol emzimbeni.
Ama-inhibitors asetshenziselwa ukuthinta i-cholesterol ngokusebenzisa i-lumen yamathumbu. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezinje kunconyelwe amazinga we-cholesterol wamamilimitha angama-7.3 ilitha ngalinye.
Izimo zibhekwa njengesidakamizwa esidume kakhulu se-cholecystitis. Into esemqoka lapho uphuza umuthi ukukhethwa komthamo. Ukwanda kwesilinganiso kuholela ekunciphiseni okukhulu kwe-cholesterol kanye nokuthuthuka kwesimo sokushaqeka emzimbeni.
Ukusetshenziswa kwemithi kaningi kwenziwa kuphela ngokuhlanganiswa nendlela okungeyona yezidakamizwa. Lokhu kuthuthukisa ukulawulwa kwemvelo kwe-cholesterol.
Uma welapha, into esemqoka okufanele uyikhumbule ukuthi noma yikuphi ukuphambuka ekudleni, umthwalo noma umthamo wezidakamizwa kuholela emiphumeleni engalindelekile. Imvamisa, izifo ezingalapheki zenzeka.
Lapho welapha i-cholesterol enezinga le-7, into esemqoka ukubheka isilinganiso sama-lipoprotein aphezulu futhi aphansi.
I-cholesterol ye-LDL iphakeme - kusho ukuthini?
Sanibonani bafundi abathandekayo! Lesi sihloko sikhuluma nge-cholesterol ye-LDL. Sixoxa ngezizathu zokwanda kwaso. Uzofunda ukuthi yiziphi izifo ezibangela ukuthi kufakwe ama-alcohol utshwala nokuthi ungawehlisa kanjani i-cholesterol ekhaya.
I-cholesterol ye-LDL yi-cholesterol ephansi-density lipoprotein cholesterol, into edumile ebizwa ngokuthi i-cholesterol embi noma embi. I-LDL yiyona ndlela yokuhamba phambili ye-organic complements, yilolu hlobo lotshwala obunamafutha olungena ngenkuthalo emikhunjini nasezitho zangaphakathi.
Izinkomba ze-cholesterol ye-LDL zihlobene kakhulu nengozi yokuthola i-atherosulinosis, uma kuqhathaniswa nezinkomba ze-cholesterol ye-HDL, lokhu kungenxa yokuthi ingxenye yengxwala yamafutha e-LDL ixhumana nemithambo yegazi nezitho zangaphakathi.
Lapho udlula emithanjeni yenani elikhulayo le-cholesterol, amaseli ezindonga zemithambo abamba izinhlayiya zento. Ngaphansi kwethonya lezinto zasendaweni, ukwakheka kwamathafa e-atherosselotic kwenzeka. Amaplaque anciphisa ukukhanyisa kwemikhumbi futhi adale i-thrombosis, abangele izifo ezinjengokuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi.
Lapho i-LDL Cholesterol Iphakeme
Mayelana ne-LDL cholesterol yisho nini amanani adlula i-4.52 mmol / ilitha kwabesifazane kanye ne-4.8 mmol / litre emadodeni. Ngomfutho okwandayo we-low-density lipoprotein cholesterol, ubungozi bokuthuthuka kokungasebenzi kohlelo lwezinhliziyo nobuchopho bukhuphuka.
Ukugcotshwa okuphezulu kwe-cholesterol eyingozi egazini kukhipha umoya wayo odongeni. Ngenxa yokwakheka kwama-plaque kanye nokuncipha kwe-lumen ye-veins and artery, ukuphazamiseka kokujikeleza kwenzeka, ngokuyinhloko inhliziyo, izinso nobuchopho kuhlushwa izinguquko ze-pathological.
I-cholesterol enhle nokubi
Inani le-cholesterol ephelele ifaka izinkomba ze-LDL ne-HDL cholesterol. I-HDL - lipoprotein ephezulu kwabantu, edume ngokuthi yi-cholesterol "enhle".
Lapho kukhiqizwa i-cholesterol esibindini, ama-lipoproteins aphansi athatha into bese eyidlulisela emangqamuzaneni.
Le nqubo ingokwemvelo futhi iyadingeka emzimbeni womuntu, futhi uma kungekho zinto ezingezinhle, iphephile ngokuphelele.
Uma isibindi sikhiqiza i-cholesterol eningi, i-LDL ingalahlekelwa ngesikhathi sokuhamba, izinhlayiya ezigcobayo futhi zakha izingqimba odongeni lwemithambo yegazi.
Ama-lipoprotein we-density ephezulu enza ukuthutha okuphindaphindekayo kwento, akhulula i-cholesterol kusuka kumaseli kuya esibindini ngesimo se-bile. Ama-HDL anomphumela we-anti-atherogenic - asusa idiphozithi yotshwala obunamafutha ezindongeni zemithambo yegazi futhi avimbele ukwakheka kokuqongelelwa okusha kwendaba ye-organic.
Bona ividiyo elandelayo ukuthola okuningi ku-cholesterol enhle nokubi.
Okujwayelekile kwabesifazane nabesilisa
Ithebula libonisa amazinga wokuqedwa kwe-cholesterol kwabesilisa nabesifazane, kuya ngeminyaka, kumayunithi we-mmol / ilitha:
Iminyaka Abesifazane Amadoda
Iminyaka engama-20-30 3,1-5,16 2,9-5,05
Iminyaka engama-30 kuya kwengama-40 3,3-5,79 3,4-6,3
Iminyaka engama-40-50 ubudala 3,85-6,85 3,75-7,1
Iminyaka engama-50-60 4,05-7,3 4,15-7,1
Iminyaka engama-60-70 ubudala 4,35-7,65 4-7,15
ngaphezulu kweminyaka engama-70 4,45-7,8 4,05-7,05
Ukwazi - ukukhuphuka noma ukwehliswa
Amazinga we-cholesterol alinganiswa ngokuhlolwa kwegazi kwelebhu. Ukuhlolwa kwenziwa esiswini esingenalutho, ekuseni isiguli sivunyelwe ukuphuza amanzi athile. Ukuhlolwa kungenzeka kuphela emahoreni ayi-12 emva kokudla kokugcina, kepha isikhathi sokuphumula asikwazi ukuthatha amahora angaphezu kuka-14.
Ngaphambi kokuthatha isivivinyo, umuthi umiswa amasonto ambalwa. Ezimweni lapho ukuhoxiswa kwezidakamizwa kukhulisa ubungozi empilweni nasempilweni yesiguli, kuyadingeka ukunikeza udokotela lonke ulwazi mayelana nemithi ethethwe futhi ukhombise isilinganiso esifanele saleyo mali.
Ukudla kwehlisa cholesterol
Ngezinga elikhulayo le-cholesterol egazini, isiguli sinqunyelwe ukwelashwa ngesizathu esiyinhloko, esidale ukuthi secretion ye-pathological yotshwala obunamafutha, ukwelashwa kwehlise i-cholesterol ye-LDL, kanye nokudla kwezidakamizwa. Ukudla okukhethekile akufaki ukudla okuphezulu emafutheni futhi kufaka phakathi ukudla okune-HDL ephezulu.
Iziguli zelulekwa ukuthi zidle:
izinhlanzi zasolwandle, kanye nezengezo ezikhethekile ezisuselwa emafutheni ezinhlanzi,
amantongomane nembewu, ikakhulukazi ifilakisi,
ibhali kanye nama-oats,
apula, ithini lamapheya,
Ukuhlanza izitsha, imenyu ifaka ama-cranberries, ama-Persimmons, ujusi we-orange osanda kufakwa, amakhabe, itiye eluhlaza, ushokoledi omnyama, i-oat bran.
Uzofunda kabanzi ngokudla nge-cholesterol ephezulu kusuka kuvidiyo elandelayo.
Izidakamizwa zokwehlisa i-cholesterol
Izidakamizwa eziphambili zokufaka i-cholesterol ye-LDL ejwayelekile egazini ama-statins. Izimo zinciphisa ukukhululeka kotshwala obunamafutha ngesibindi, kuvimbe umsebenzi we-enzyme eyinhloko, obhekele ukukhiqizwa kwe-cholesterol embi.
Izidakamizwa eqenjini lama-statins:
Futhi, iziguli zinikezwe i-fibrate ebekiwe. Ama-fibrate abhubhisa i-LDL egazini, ancibilikisa i-cholesterol deposits ngokwengxenye:
Ukwelashwa okuyinhloko kokwehlisa i-cholesterol kubandakanya i-nicotinic acid. Imithi yaleli qembu ivimbela ukuvela kwe-cholesterol embi, ngenxa yalokho yehlisa izinga lotshwala obunamafutha egazini.
Njengokwelashwa okusizayo, kuvunyelwe ukusebenzisa eminye imishanguzo ukwehlisa i-cholesterol. Nazi ezinye izindlela zokupheka:
I-Flaxseed - engeza isipuni esisodwa se-flaxseeds, esivele sichotshozwe odakeni, ekudleni, isikhathi esingu-1 ngosuku. Sebenzisa umuthi kunconywa inyanga eyi-1.
I-Celery - ubilise umhlanga we-celery emanzini abilayo okwemizuzu engu-5-7, ufafaze umkhiqizo osuqediwe imbewu ye-sesame noshukela.
Izimpande ze-licorice - gazinga izimpande ze-licorice, 2 wezipuni zezinto zokusetshenziswa, uthele ama-500 ml wamanzi abilayo, ubilise imizuzu elishumi ekushiseni okuphansi, govuza umuthi. Thatha i-decoction yengxenye eyodwa kwezingilazi amahlandla amane ngosuku. Inkambo yokwelashwa ithatha amasonto ama-2-3, bese uthathe ikhefu inyanga.
Ukwehlisa i-cholesterol ekhaya
Ukwehlisa ukuqoqwa kwe-cholesterol eyingozi ye-LDL egazini, ukuthatha imishanguzo akwanele - ngaphandle kokuguqula indlela yokuphila ngemuva kokuphela kwenkambo yokwelapha, leli nani lizophinda likhuphuke.
Izindlela zokuvimbela zifaka:
ukwenqatshwa kokudla okungenamsoco - okunamafutha, ukudla okuthosiwe, ukudla okusemathinini, ama-marinade, inyama ebhemayo, ukudla okubhakiwe nemikhiqizo ye-confectionery, ukudla okusheshayo, ukufakwa kwemifino entsha nezithelo, okusanhlamvu okunempilo,
Ukuqedwa kwemikhuba emibi - utshwala nokubhema,
ukunciphisa umzimba okunempilo ngokukhuluphala,
imisebenzi yansuku zonke yokuzivocavoca - ezemidlalo, ukuzivocavoca umzimba, ukwelashwa ngokuzivocavoca umzimba noma ukuhamba ngemvelo.
Le mithetho elula izosiza ukwehlisa i-cholesterol futhi ivikele ukuthi ingakhuphuki futhi.
Kubalulekile futhi ukwelapha zonke izifo ngesikhathi, eziningi zazo zivusa ukucasulwa okwengeziwe kwezinto eziphilayo.
Yini okufanele uyikhumbule
Inani le-cholesterol ephelele ifaka:
I-cholesterol ye-LDL - "kubi" cholesterol,
I-cholesterol ye-HDL “cholesterol” enhle.
Ngokuya ngeminyaka, izinga le-cholesterol liyahluka:
kusuka ku-3.1 kuye ku-7.8 mmol / litre - kwabesifazane,
kusuka ku-2.9 kuya ku-7.05 mmol / litre - emadodeni.
Ukunciphisa i-cholesterol ye-LDL, faka:
imithi - i-satin, i-fibrate, i-nicotinic acid,
amakhambi abantu nemikhiqizo yokudla,
ukulungiswa kwendlela yokuphila.
Sizokubona esihlokweni esilandelayo!
Yini engenziwa futhi engenziwa nge-cholesterol ephezulu?
Ukuthi wenzeni nge-cholesterol ephezulu nokuthi ungadla kanjani?
Konke akucaci kangako: cholesterol itholakala kumaseli nezicubu, ibamba iqhaza ezinqubweni ze-metabolism yamafutha.I-cholesterol yokudla ingena emzimbeni ngemikhiqizo yezilwane, bese kukhiqizwa ezinye izinhlobo ezi-2 ze-cholesterol bese zisakazwa egazini esibindini:
umthambo ophansi (kubi) imithambo yegazi,
ukushuba okukhulu (kuhle) - kuhlanza imithambo yegazi.
Ngokulawulwa kwe-cholesterol, isilinganiso sezinhlobo zayo sibalulekile. Yini okufanele uyenze ukukhulisa i-cholesterol enhle nokunciphisa okubi?
I-cholesterol embi inyuka ngalezi zizathu ezilandelayo:
ukudla ngokweqile futhi ngokweqile
ukudla ukudla okunamafutha amaningi.
Ingozi yokwanda kwe-cholesterol emibi inyuka ngefa eliyindlala, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme. Ubungozi yizifo zesibindi, izinso kanye ne-yegilo yegilo, ukukhulelwa, ukuqala kokuya esikhathini.
Amathuba okukhula kwe-cholesterol nayo ixhomeke ebulilini nasebangeni: emadodeni nasebekhulile liphezulu kunabesifazane, intsha nentsha yabantu abadala.
Uma izinkomba sezifinyelele ezingeni eliyingozi, isiguli sinomfutho wegazi ophakeme, isifo sikashukela, ukukhuluphala ngokweqile noma sineminyaka engaphezu kwama-75 ubudala, khona-ke udokotela uyala:
Imithi eyehlisa ukukhiqizwa kwe-cholesterol ngesibindi ngokuhlanganiswa ne-bile acid.
Kulesi sifo senhliziyo, ama-statin athathelwa impilo yonke. Udokotela kuphela okufanele akhethe umuthi - ngesisekelo sokuhlaziya kanye nesimo jikelele somzimba wesiguli.
Ukuthi wenzeni nge-cholesterol ephezulu uma kungekho zici ezengeziwe zobungozi:
khulisa ukusebenza komzimba - hamba noma ugijime, zivivinya umzimba, vakashela ichibi, ukudansa,
yekela ukubhema notshwala,
lala amahora angama-7−9 ngosuku ukuthola umzimba okujwayelekile,
buyisela ikhofi ngetiye leqabunga eliluhlaza,
yenza isisindo sibe ngokwejwayelekile
Kuyaluleka ukuthi ekudleni okukodwa okukhona nokukhuphuka kwe-cholesterol kunconyelwa kuwe ngudokotela noma udokotela wezokwelapha ochwepheshe. Izincomo ezijwayelekile:
faka imfuyo yezilwane emenyu - ibhotela, ushizi, amaqanda, isaladi, inyama enamafutha, i-offal,
buyisela ibhotela nge-olive engachazwanga, i-lined, ummbila noma i-sunflower,
khipha ukusetshenziswa kwamafutha we-trans - imajarini, imayonesi, amasoseji,
yidla amaprotheni angenawo amandla - imikhiqizo yobisi enamafutha aphansi, inyama enamafutha amancane, inkukhu noma inhlanzi,
cebisa ukudla kwakho ngokudla okune-fiber eningi, ebamba futhi isuse amafutha emgodini wokugaya - ama-legumes, okusanhlamvu okusanhlamvu okuphelele, imifino, izithelo namajikijolo.
ama-apula, ithini lamapheya, ama-apricots, izithelo zezithelo zomdiliya, amagilebhisi abomvu, ukwatapheya, amapomegranati,
ama-cranberry, ama-blueberries, ama-lingonberry, ama-cranberry, ama-sitrobheli, ama-raspberry,
izaqathe, u-anyanisi, ugarlic, utamatisi, zonke izinhlobo zeklabishi,
ulethisi wamaqabunga, isipinashi, dill, iparsley,
i-oat bran nenhlamvu
imbewu yefilakisi, u-sesame, u-sunflower, ithanga,
amantongomane - ama-pistachios, umsedari, ama-alimondi,
izinhlanzi ezinamafutha olwandle - ama-salmon, ama-sardine.
Amavithamini C, E no-B B ayasebenziseka ku-cholesterol ephezulu.
Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, phinda uhlaziye futhi. Uma cholesterol ephakeme iqhubeka, yini okufanele ngiyenze? Xhuma umuthi njengoba uyalelwe udokotela wakho kokudla kwakho nasemzimbeni.
Ezimweni ezimbi kakhulu, ukuthatha imishanguzo ukwehlisa nokugcina amazinga e-cholesterol ngokujwayelekile kufanele kube impilo yonke - ngezivivinyo zokulawula eziphoqelekile. Ezinye iziguli ukuze zigcine amazinga e-cholesterol ajwayelekile anele ukulungisa indlela yokuphila kanye nokudla okunempilo.
I-cholesterol ephezulu iyisiginali eyingozi
I-cholesterol iyinhlangano ejwayelekile - i-hydrocarbon, engokwesigaba samafutha anamafutha. Igama lamakhemikhali yi-cholesterol, ngesimo salo esimsulwa zingamakristalu amhlophe angenawo ukunambitheka noma iphunga.
Emzimbeni womuntu, i-cholesterol yenziwa ngokuzimela futhi ingena kuyo ngokudla kwemvelaphi yezilwane: inyama, i-offal, inhlanzi, ubisi namaqanda.
Ukukhiqizwa kwe-cholesterol eningi, cishe ama-80%, kwenzeka esibindini, okusele kuso kwakhiwa ezindongeni zamathumbu, izindlala ze-adrenal, isikhumba nezinye izitho ezithile.
Ngendlela yayo emsulwa, i-cholesterol ayikwazi ukuhanjiswa emzimbeni wonke, ngoba ayinamanzi. Ukuthunyelwa kwe-cholesterol emzimbeni kwenziwa ngamaphrotheni lapho enza khona i-compop ebizwa ngokuthi i-lipoprotein. Ama-lipoprotein esakhiweni sawo ayindabuko, phakathi kwawo kunezinhlobo ezi-4 eziphambili ezihlukile komunye nomunye ngobukhulu nobukhulu.
Ngokombono wokubheka umuthi osebenzayo, i-cholesterol esezingeni eliphansi, okuyingxenye yama-lipoprotein asisindo esincane kanye ne-high-density cholesterol, eyakha i-lipoprotein ephezulu yamaseli ku-plasma yegazi, iyodwa. Ekuthuthukiseni i-atherossteosis, indima eyinhloko idlalwa yizinga eliphakeme le-lipoproteins ephansi (LDL) nokuqukethwe okuphansi kwe-high density liporproteins (HDL).
Indima ye-cholesterol emzimbeni womuntu
Umzimba womuntu ojwayelekile uqukethe cishe amagremu angama-350 e-cholesterol: ama-90% ezinqamuzaneni zamaseli zazo zonke izicubu ezisesifundeni esingavunyelwe kanye ne-10% kwi-plasma yegazi njengengxenye yama-lipoprotein.
Ama-cholesterol amaningi atholakala ebuchosheni nasentanjeni yomgogodla, njengengxenye ye-myelin sheath ye-nerve endings. Esibindini, ama-asidi ama-asidi ahlanganiswa kusuka kuwo, ngaphandle kwalokho ukugaya okwejwayelekile kwamafutha okwenza ukudla akunakwenzeka.
Cishe ama-70% awo wonke ama-cholesterol akhiwe emzimbeni ngosuku asetshenziselwa lezi zinhloso.
I-cholesterol ingumbhalo oyisihluthulelo oyinhloko wokuhlanganiswa kwama-steroid nama-hormone ocansi. Emadodeni, ukuntuleka kwe-cholesterol emzimbeni kuholela ekuphazamisekeni okukhulu kwezocansi, futhi kwabesifazane, i-amenorrhea ingenzeka.
Impi yokulwa ne-cholesterol ebangeni lokuzala abantwana futhi ikakhulukazi ngesikhathi sokukhulelwa akuqinisekisiwe ikakhulukazi, ngoba ngaphambi kokuqala kokuya esikhathini, ama-hormone abesifazane besifazane ukuvimba ukubekwa kwe-cholesterol ezindongeni zemithambo yegazi.
Ngokuqondene nabesifazane abakhulelwe, kumane nje akwamukeleki ukuthi balwe ne-cholesterol, ngoba lokhu kungaholela ekuphulweni okukhulu kokuthuthukiswa kwe-intrauterine. Izinga elijwayelekile le-cholesterol ezinganeni nasezinganeni ezincane lubaluleke kakhulu, ukusweleka kwalo kusongela ukuthuthukiswa kwama-rickets, ngenxa yokuhlanganiswa okungafanele kwe-Vitamin D.
Yini ubungozi be-cholesterol ephezulu yegazi?
Kuyingozi i-cholesterol ephezulu yegazi, okuyingxenye yama-lipoprotein aphansi kwabantu. Ngama-lipoprotein anomqondo ophansi onomphumela we-atherogenic. Zingenye zezici eziyingozi ezinkulu ekuthuthukiseni i-atherosulinosis.
I-LDL iveza usongo olukhulu kakhulu ohlelweni lwezinhliziyo. I-cholesterol equkethwe kuzo kulula kakhulu ukuyiqonda futhi, ebekwe kwi-endothelium yemithambo, yakha ama-cholesterol plaques, oyimbangela eyinhloko yokwakhiwa kwe-atherossteosis.
Izinguquko ze-atherossteotic emithanjeni ziholela ekwakhiweni kwezifo zenhliziyo:
isifo senhliziyo (CHD),
ingozi ye-cerebrovascular ajali,
umfutho wegazi ophakeme, njll.
Lezi zifo zivame ukubulala futhi ziyimbangela enkulu yokukhubazeka emazweni amaningi.
Kungani i-cholesterol yegazi iphakanyisiwe?
Izimbangela eziyinhloko ze-cholesterol ephezulu zitholakala ngokwemvelo:
indlela yokuphila engafanele yesiguli: ukungasebenzi ngokomzimba, ukubhema, ukusebenzisa kabi utshwala, izimo ezicindezela njalo,
izintandokazi zokupheka: ukusetshenziswa okungapheli kokudla okunamafutha, imvelaphi yezilwane, inani elanele lemifino entsha nezithelo ekudleni,
Izifo ezihlangana nazo: ukukhuluphala, isifo sikashukela, izifo ezihlelekile zezicubu ezithintekayo,
Izimo ezithile zomzimba (ngokwesibonelo, izimbangela ze-cholesterol ephezulu kubantu besifazane izinguquko eziningi ze-hormonal emzimbeni ngesikhathi sokuya esikhathini).
Ukwanda kwe-cholesterol kubonwa kubantu abanesifiso sokuthola ifa, lapho izihlobo eziseduze zihlaselwa yi-atherossteosis. Lapho efika ebudaleni, ubungozi be-hypercholesterolemia banda kakhulu. Ubulili besilisa nabo buba yingozi.
Imvamisa, abantu bafunda ukuthi baphakamisile i-cholesterol, lapho kuvela izimpawu, izilonda ze-atherosulinotic zemithambo yegazi. Ukuba nezinkinga zempilo kwenza umuntu afune usizo kudokotela.
Ngomqondo owazisa kakhulu wokuqukethwe kwe-cholesterol ephelele ku-plasma yegazi, kanye nesilinganiso se-cholesterol embi nokuhle, kwenziwa isifundo se-biochemical - ukunqunywa kwephrofayili ye-lipid.
Imvamisa, inkomba yocwaningo olunjalo ukuvela kwezimpawu ze-cholesterol ekhuphukayo esigulini:
Izifo zezinso nezinso.
Iphrofayili ye-lipid ifaka izinkomba ezilandelayo:
i-cholesterol isiyonke (i-cholesterol ephelele) iyipididi yegazi eyinhloko, yenziwe ngo-hepatocytes, futhi ingena emzimbeni nokudla. Lesi sikhombisi singesinye esibaluleke kakhulu kuphrofayili ye-lipid, futhi sibonisa ngokuphelele umzimba we-metabolism emzimbeni, futhi futhi sibonisa ngokungaqondile ubungozi bokuthola isifo sokuqina kwemithambo yegazi. Okujwayelekile izinga le-cholesterol lika-3.3 - 5.5 mmol / l,
ama-low density lipoproteins (LDL) - angenye yezingxenyeni ze-atherogenic, lipid kakhulu. Imvelo ye-LDL ingu-1.7 - 3.6 mmol / l,
high density lipoproteins (HDL) - le ngxenye yama-lipids inomphumela omuhle emzimbeni, evimba ukubukeka kwamabala asezindongeni zemithambo yegazi. Umphumela we-anti-atherogenic we-HDL unqunywa amandla abo okudlulisela i-cholesterol esibindini, ekusebenziseni kwayo okulandelayo kanye nokuphuma emzimbeni kusuka emathunjini. Imvelo ye-HDL okungenani i-0.9 mmol / l,
ama-triglycerides amafutha angathathi hlangothi we-plasma. Okujwayelekile kubhekwe ukuthi kube ngu-0.4 - 2.2 mmol / L.
inkomba ye-atherogenicity (i-atherogenicity coeffnty) yinkomba efanekisela isilinganiso sezingxenyana eziyingozi (atherogenic) nezinhle (antiatherogenic) ze-lipid. Isimo sokulinganisa kwe-atherogenic: hhayi ngaphezu kwe-3.5.
Muva nje, sekuyinto engenzeka ukubheka i-cholesterol ngaphandle kokuvakashela ilabhorethri enezinto eziphilayo. Lokhu kungenziwa kusetshenziswa idivaysi yokulinganisa i-cholesterol ekhaya. Imitha ye-cholesterol yasekhaya kulula ukuyisebenzisa. Ngezikhathi ezithile hlola izinga lama-lipids kunconywa ukuthi uqale kusuka eminyakeni engama-25 ubudala.
Yini okufanele uyenze uma kuphakama i-cholesterol?
Sesivele sithole ukuthi kungani okuqukethwe i-cholesterol kukhuphuka, ngakho-ke ungakuthonya ngokuqeda izinto eziyingozi eziyinhloko.
Izinkomba ze-cholesterol esezingeni le-6.6 - 7.7 mmol / l, udinga ukucabanga kabusha ngokudla kwakho futhi wenze ukulungiswa kwendlela yokuphila, uma izinga lingama-8.8 - 9.9 (LDL ngaphezu kwe-4.4) mmol / l, ke lokhu sekuyimbangela yokukhathazeka, futhi kungcono ukubonana nodokotela esimweni esinjalo.
Ungayiphatha kanjani i-cholesterol ephezulu?
Okokuqala, kuyadingeka ukuyeka imikhuba emibi bese unamathela kwindlela yokuphila enempilo, wandise umsebenzi womzimba.
Ngokuya kokudla, kuzodingeka ulinganisele kakhulu ukudla okuwumthombo we-cholesterol embi: amafutha ezilwane, kufaka phakathi imikhiqizo yobisi enamafutha, amaqanda, imikhiqizo yenyama nengulube.
Ezokwelashwa, kusetshenziswa izidakamizwa zamaqembu ahlukahlukene emithi: ama-statin, ama-nicotinic acid derivatives, fiboates, sequestadors of bile acids nabanye.
Ungayikhulisa kanjani i-cholesterol enhle yegazi?
Ngale njongo, kusebenza kakhulu ukudla ukudla okufana noku:
inhlanzi yolwandle olubandayo (i-salmon tuna, i-trout, i-cod, i-mackerel, isardine nabanye),
basebenzise uwoyela wemifino ohlukile, kufanele basebenzise ngokuphelele amafutha wezilwane,
izindunduma eziphakeme ezinsumpa
Izithelo ezintsha, amajikijolo, imifino kanye namantongomane kufanele kudliwe nsuku zonke.
Uma i-cholesterol yegazi iphakeme: ukuthi wenzeni futhi yini ingozi
I-cholesterol ephakanyisiwe ibangela izinqubo ezithinta kabi isimo somzimba.
Ngokungangabazeki, ukwanda kokuhlungwa kwale nto kuyingozi empilweni. Futhi kulokhu, kuyadingeka ukuguqula izinga le-cholesterol ngokushesha okukhulu. Kungani le ndawo iyingozi kangaka? Ngakolunye uhlangothi, ukube beungekho egazini, umzimba ubungazizwa uswele u-vithamini D, ubungeke udonse amafutha.
Ngakolunye uhlangothi, ama-hormone ngeke akhiqizwe.
Kepha ngasikhathi sinye, i-cholesterol eyeqile ihlala emithanjeni futhi, iqongelela, iyinkimbinkimbi ukuhamba kwegazi. Lokhu kugcwele izinkinga njengokushaywa unhlangothi noma ukushaya kwenhliziyo. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukukhetha ukwelashwa okufanele. I-cholesterol ayikhishwa ngokwemvelo emzimbeni.
Yini esongela ngokweqile
I-cholesterol iyinhlangano eyinkimbinkimbi ebalulekile ukuze kugcinwe ukusebenza komzimba okujwayelekile. Kepha uma ukukhuphuka kwabo egazini kukhuphuka, lo muthi uqala ukuqongelela. Kwakhiwa imali ezungeze lapho
kwakhiwa izicubu zesilonda. Ngenxa yalokho, kuvela i-atherosselotic plaque, i-lumen yomkhumbi iba mncane, ukuphuma kwegazi kuyancipha.
Uma i-artery ivala, khona-ke ukuphuma kwegazi kuyama bese izicubu, ezithole konke okudingekayo kulo mkhumbi, ziyafa kancane kancane. Ngemuva kwalokho, uma i-plaque ifomu enhliziyweni, ingozi yokuthuthuka kwe-angina pectoris iyanda, okuholela ekushayweni noma ekuhlaselweni yisifo senhliziyo.
Uma i-cholesterol yegazi iphakeme, kufanele nakanjani uyeke ukubhema. Ukuthuthukisa isimo somzimba, umuntu kumele futhi andise ukusebenza komzimba. Noma wenza izivivinyo ezilula ze-aerobic, ukulwa ne-cholesterol kuzoholela emiphumeleni oyifunayo ezinyangeni ezimbili zokuqala.
Ukuzivocavoca iCardio kufanele kukhethwe. Ukuqeqeshwa akufanele kube ngaphezu kwengxenye yehora. Ungenza futhi amasethi amabili wemizuzu eyishumi nanhlanu.
Uma ukuhlolwa kwegazi kukhombisa ukuthi izinga le-cholesterol liphakeme, futhi le nkomba ayisebenzi ukunciphisa lesi sikhombisi, lesi simo kufanele selashwa. Ukususwa okusebenzayo kwenjini elimazayo emzimbeni kunikezwa ngama-statins - izidakamizwa ezivame kakhulu.
Ucwaningo luqinisekisile ukuthi ama-statin awasizi kuphela ukuqeda i-cholesterol, kodwa futhi ngokwejwayelekile enza impilo ibe njalo. Ngenxa yokuthi le mithi cishe ayinayo imiphumela emibi, ukusetshenziswa kwayo isikhathi eside kuvunyelwe.
Ukufaka i-garlic ekudleni kwakho kwansuku zonke kusiza ne-LDL ephansi. Ngaphezu kwalokho, igalikhi liyindlela enhle yokuvikela ukunqwabelana kwe-cholesterol ezindongeni zemithambo yegazi.
Uma inkomba ye-cholesterol inyuke, ungayinciphisa ngokusebenzisa izimpande zaseCanada ophuzi, esiza ukwelapha zonke izifo zesistimu yemithambo yenhliziyo nenhliziyo.
Izimpande eziphuzi zenza ukukhiqizwa kwe-cholesterol ezuzisayo ngesibindi, okususa izinto eziyingozi ngokweqile emzimbeni
Ukufakwa kokudla okuqukethe i-fiber kumenyu kwehlisa amazinga we-LDL. I-Fibre isebenza njenge-statin, iqoqa i-cholesterol emathunjini, ivikele ukunqwabelana kwayo egazini.
Uma i-cholesterol yegazi iphakeme, kunconywa ukugxila ekusetshenzisweni kwezinhlanzi ezinamafutha ezinhlobonhlobo noma uwoyela wezinhlanzi emaphaketheni.
Amafutha e-Fish aqukethe ama-acid angama-omega-3, adingekayo ukwenza ukukhiqizwa kwe-lipid kube ngokujwayelekile.
IPolycosanol, etholakala kumoba, ibhekwa njenge-statin enhle kakhulu yemvelo. Ungayithenga ngesimo samaphilisi. I-Policosanol inamandla okuvimba ukwakheka kwama-plaque, ihlinzeka ngokuqina kwengcindezi, kanye nokwehliswa kwe-lipoprotein index ephansi.Ngaphezu kwalokho, iphoyisanol ilwa ngempumelelo nokukhuluphala.
Ukuze i-LDL yenze umzimba ube ngokwejwayelekile emzimbeni, ukudla kufanele kulungiswe kuqala, okungukuthi, ukuyeka ukusetshenziswa kokudla okuqukethe i-cholesterol. Kufanele futhi wenqabe kumaswidi kanye nama-confectionery, ngoba aqukethe kalula izakhamzimba ezinamakhompiyutha, anomthelela ekuqongeleleni i-cholesterol emikhunjini.
Udinga ukulawula isisindo sakho, ngoba abantu abakhuluphele banezakhi eziyingozi kakhulu egazini labo kunabantu abanesisindo somzimba esijwayelekile.
Ukuzivocavoca umzimba nokuqeqeshwa kwezemidlalo kuyingxenye ebalulekile ekuvinjelweni kwe-atherosulinosis. Ukuzivocavoca umzimba kudingeka kwenziwe njalo. Ukuzivocavoca kuzosiza ukwehlisa izinga lama-lipoprotein ayingozi ngokwandisa ukusetshenziswa kwawo ngamaseli ngezidingo zamandla.
Kufanele uyeke imikhuba emibi. I-Alcohol ne-nicotine kunomthelela ongemuhle kakhulu esimweni semithambo yegazi nempilo yesibindi. Ukungeza izithelo, imifino, nokunye ukudla okuqukethe i-fiber ekudleni kunciphisa kakhulu ingozi yokwanda kwamazinga e-cholesterol.
Kuyadingeka futhi ukuthatha izinyathelo njalo ukuvikela ukukhula kwezifo zohlelo lwe-endocrine: isifo sikashukela, izifo zesibindi, i-bile nezinso.
I-cholesterol iyisizinda esencazelo yaso evumayo emzimbeni. Kuyilimaza ngasikhathi sinye impilo futhi iqinisekisa ukusebenza okujwayelekile. Le nto kumele ibe khona emzimbeni, kepha kungakapheli imikhawulo ejwayelekile.
Kubalulekile ukuba njalo uhlolwe ukutholakala kokuqalwa kwegazi, ngoba ubungozi bokuqalwa kwe-atherosulinosis buxhomeke enanini le-LDL.
Isikhombi esisebangeni elijwayelekile sithuthukisa ukuzalwa kabusha kweseli, ukondliwa kwezicubu zomzimba, sinikeza isivikelo ekuphethweni kwezinzwa futhi sithinta eminye imisebenzi eminingi ewusizo.
I-cholesterol ethe xaxa ithinta ngqo isimo sodonga lwemithambo yegazi, okwenza umsebenzi wesistimu yethambo futhi inciphise ukuhamba kwegazi. Ngaphambi kokuthola iziphetho nokuqala ukwelashwa, kuyadingeka ukunikela ngegazi ukuze kwenziwe ucwaningo. Kungenzeka ukuthi ukwehlisa i-cholesterol akudingeki.
Ngakho-ke, umsebenzi oyinhloko ukuvimbela ukunqwabelana kwe-cholesterol embi. Futhi ngenxa yalokhu kuyadingeka ukunamathela ekudleni okuyikho nempilo. Ukuqeqeshwa kwezemidlalo, ukuvakashela udokotela ngesikhathi, ukushiya imilutha - konke lokhu kuyizici ezibalulekile zempilo.
Uma une-cholesterol ephezulu
Janawari 25, 2009, 09:29
Sivame ukuzwa eziteshini zethelevishini ezivela kodokotela nakwabajwayele ukuthi ukusetshenziswa kokudla okuqukethe i-cholesterol kudinga ukuncishiswa. Lokhu kuvame ukuphikiswa, bethi, empeleni, i-cholesterol ayiyona ingozi emzimbeni womuntu. Ngaphezu kwalokho, amangqamuzana omzimba, ikakhulukazi isibindi, nawo ayakhiqiza, ngakho-ke i-cholesterol yokudla ayinakusilimaza.
Ingabe i-cholesterol iyingozi noma inenzuzo futhi kufanelekile ukuyilwa?
I-cholesterol yinto efana namafutha ebaluleke kakhulu kumuntu. I-cholesterol iyingxenye yolwelwesi lwawo wonke amangqamuzana asemzimbeni, kuningi kuyo ezithweni zezinzwa, ikholesterol iyadingeka ekwakhekeni kwama-hormone amaningi.
Kepha! Umzimba ngokwawo ukhiqiza i-cholesterol ngobuningi obwanele ukwanelisa izidingo zayo. Kodwa-ke, umuntu uthola i-cholesterol nayo ngokudla. Lapho i-cholesterol emzimbeni, okokuqala, egazini lomuntu iba kakhulu, lapho-ke isuka kumngane iphenduka isitha esibulalayo.
Isebenza kanjani i-cholesterol lapho kuningi kakhulu kuyo?
I-cholesterol ethe xaxa iqongelela ezindongeni zemithambo yegazi. Cishe la ma-deposithi, axhumekile noma, ngamanye amagama, izicubu zesikhuhla zikhula, ifomu le-calcium deposits. Lokhu kwakha i-plaque ye-atherosclerotic. Ibeka phansi ukukhanya kwesitsha, inciphise ukuphuma kwegazi, futhi ukufakwa kwe-thrombus kuholele ekuqhekekeni kwayo.
Lapho isitsha sivalekile, ukugeleza kwegazi kuyeka, nezicubu zesitho esondla lo mkhumbi ziyafa kancane kancane, ngaphandle kokuthola umoya-mpilo nezakhi zomzimba. Uma ukuqhuma kwenzeka enhliziyweni, kuvela i-angina pectoris, bese kuthi ukufakwa kwe-myocardial, uma ukuhlukunyezwa kwengqondo kwenzeka engqondweni.
Kwesinye isikhathi imithambo yemilenze iyathinteka, khona-ke umuntu uzwa izinhlungu ezingabekezeleleki futhi uvame ukulahlekelwa amandla okunyakaza. Insimbi yokuqala ekhomba ubungozi bokuthola lezi zifo yizinga lokukhuphuka kwe-cholesterol.
Wonke umuntu oneminyaka engaphezu kwengu-20 kufanele azi izinga labo le-cholesterol. Ukuze wenze lokhu, udinga nje njalo - okungenani kanye njalo ngeminyaka embalwa - uhlole igazi ngokwezinga le-cholesterol ephelele nokuqukethwe kwayo ngezindlela ezahlukahlukene zokuhamba - i-lipoprotein.
Kusho ukuthini izinamba ekuhlaziyeni?
Ekuhlolweni kwegazi, uzobona izinga le-cholesterol (cholesterol), kanye nezinye izibalo. Iqiniso ngukuthi ku-cholesterol yegazi lomuntu kuhanjiswa kanye namaprotheni, kanti izakhiwo ezinjalo zibizwa ngokuthi ama-lipoprotein.
Ama-density lipoproteins aphansi (i-LDL) kanye nama-prexpors amancane kakhulu we-density (VLDL) aphansi ngamaprotheni, makhulu futhi aqukethe i-cholesterol namafutha amaningi - ama-triglycerides. Ukungena odongeni lomkhumbi, bahambisa i-cholesterol eyeqile esitokisini semithambo. Ukwanda kwamazinga wegazi ngokuqondile lezi zingxenye kuholela ekukhuleni kokuqala kwe-atherosclerosis.
Ama-high density lipoproteins (HDL) amancane ngosayizi, aqukethe iprotheni ehlukile kune-LDL. Ukungena odongeni lomkhumbi, babamba i-cholesterol bayise esibindini. Izinga eliphansi le-HDL, i.e. cholesterol kwizakhiwo "ezinhle", kuphakama nengozi ye-atherosulinosis.
Amazinga aphezulu we-cholesterol kanye nemingcele yegazi ehlobene:
Bheka i-cholesterol yakho!
Izinto ezenziwe ngokwenzelwe izikhungo zezempilo. Funda kabanzi ngezikhungo zezempilo nomsebenzi wazo endaweni yangakini.
I-cholesterol yegazi: okwejwayelekile, ephansi futhi ephakeme
Isifo senhliziyo singesinye sokuqala ohlwini lokugula okubulalayo kuzo zonke izigaba zeziguli. Isizathu esikhulu sabaningi babo izinga eliphezulu le-cholesterol egazini kanye nokuphazamiseka okuhlobene nalo ne-pathologies ohlelweni lwezinhliziyo. Uyini lo muthi futhi uyini ubungozi bawo?
I-cholesterol ukunqwabelana okufana namafutha okufakwa ezindongeni zemithambo yegazi, kunciphisa ukuqina kwawo egazini futhi kuyimbangela yesifo esingelapheki, umfutho wegazi ophakeme kanye nemivimbo.
Ama-cholesterol plaque abizwa ngokuthi yi-cholesterol plains angawuvimba ngokuphelele umkhumbi, futhi ayeke ukudla inhliziyo noma esinye isitho. Uma i-carotid artery ihlupheka, kuba nesifo sohlangothi esisongela impilo esigulini.
Kulokhu, kuyadingeka ukuqapha ngokucophelela izinga le-cholesterol egazini, ikakhulukazi kulezi ziguli ezinelifa elibi.
Ukwanda kwe-cholesterol yegazi kukhombisa ngokuyinhloko ukugula okukhona emzimbeni. Isiguli esinjalo sisengozini ngenxa yokuthuthuka okungenzeka kwe-atherossteosis. Kulokhu, kunokuxhumana okucacile phakathi kokuqukethwe kwe-LDL esegazini kanye nokulimazeka kwezifo zenhliziyo:
Ingozi ephezulu: ngaphezu kwe-6.21 mol / L.
Isimo somngcele: 5.2-6.2 mol / L.
Ingozi ephansi: ngaphansi kuka-5.17 mol / L
Izici zokuhlinzeka nge-atherosulinosis ukukhuluphala nesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, kufakazelwa ngokwesayensi ukuthi ukusetshenziswa kokudla okugcwele i-cholesterol akuyona njalo imbangela eyinhloko ye-atherossteosis. Amaprotheni ahlanganiswa njengama-lipoprotein aphansi futhi aphansi kakhulu adlala indima enkulu kulokhu.
Izinga elijwayelekile, i-HDL noma i-LDL: yisiphi inkomba okufanele ugxile kuyo
Inkomba ngayinye ngayinye isivumela ukuthi sihlole isimo senqubo ethile ngesikhathi sokuwohloka komzimba kwe-cholesterol nokusetshenziswa kwayo okulandelayo.
Izinga eliphelele le-cholesterol libonisa izinga lobungozi be-atherosulinosis ngokuvamile.Ngokwami, le nkomba ayifundisi ngokwanele: ukwenza isithombe esiphelele sesimo se-lipid metabolism, kwenziwa izifundo ezengeziwe.
Ama-lipoprotein angabantu abakhulu
I-LDL ithumba i-cholesterol esibindini futhi iyithwale kuwo wonke amaseli nezicubu zazo zonke izitho zomzimba. Le "cholesterol" embi ", enomphumela we-atherogenic - amandla okunamathisela ezindongeni zemithambo yegazi, anciphise i-lumen yawo, futhi akha ama-atherosranceotic plaques.
Ngokwezinkomba ze-LDL, ubungozi nezigaba zokuthuthuka kwenqubo ye-pathological zihlulelwa:
isuka ku-2,5 iye ku-3.3 mmol / l - ejwayelekile ngokomzimba, lapho kungekho khona izinto ezibangela ubungozi, cha
kusuka ku-3.4 kuye ku-4.1 - kungenzeka okukhulu kokuthuthukisa isifo sokuqina kwemizwa,
ukusuka ku-4.1 kuye ku-4.9 - kuhambelana nokuboniswa kokuqala kwalesi sifo,
ngaphezulu kuka-4.9 kusho ukuthi lesi sifo siyaqhubeka, ubungozi bezinkinga buyakhula.
Lapho amaseli ezitho zomzimba nezicubu ezihlukanisile inani le-cholesterol yamahhala edingekayo ngezidingo zazo, i-HDL ithatha inani elisele bese iyibuyisela esibindini ukuze iphinde ilahlwe. Ama-lipoprotein asezingeni eliphakeme angama-cholesterol "amahle", kuvimbela ukukhula kwamathafa we-atherossteotic.
Umehluko phakathi kwe-LDL ne-HDL.
Izinkomba ezijwayelekile zokuphila ze-HDL - 1.0-2.0 mmol / l, uma:
Ngenhla uphawu oluhle, ubungozi bokuqalwa i-atherosclerosis buye bube zero.
Ngaphansi kuka-0,8 mmol / L - kusho ukuthi lesi sifo siyathuthuka, ubunzima kungenzeka.
Umbiko wezokwelapha osuselwa emiphumeleni yocwaningo uwukuthi, kucatshangelwa zonke izinkomba ezintathu:
ukuvelela kobungozi kuzobe kungathandeki kakhulu lapho kuhlanganiswa amazinga aphezulu we-cholesterol ephelele ne-lipoprotein ephansi enokuqukethwe okuphansi kwe-HDL,
ngenkathi inkomba enkulu ephelele ephikisana nesizinda sezinga eliphakeme le-lipoprotein ephezulu nokuqukethwe kwe-LDL ephansi ngeke kube yingozi enkulu.
Lapho kuhunyushwa imiphumela yokuhlaziywa, kuyabhekwa nokuthi amazinga we-cholesterol nama-lipoprotein angawodwana futhi ancike eminyakeni yobudala, umehluko wobulili, izifo ezikhona, indlela yokuphila kanye nokudla.
Inani le-cholesterol 7.0-7.9 - ingabe lokhu kuyinto evamile noma kuningi?
Cishe i-70-75% cholesterol ikhiqizwa isibindi futhi cishe i-25% ivela ekudleni.
Ngokusekelwe ocwaningweni oluningi, ochwepheshe banquma amanani aphakathi womzimba wokuqukethwe kwalolo utshwala obunamafutha emvelo ku-plasma yegazi.
Umuntu ngesikhathi sokuzalwa unezinga le-cholesterol lika-1 kuye ku-3 mmol / L. Njengoba ukhula, ukugcwala kwayo kuyanda ngokuya ngesenzo samahhala ocansi:
ngaphansi kwethonya le-androgens, amazinga e-cholesterol akhuphuka ezinsizweni nasebangeni eliphakathi, ngenkathi kwabadala liyancipha,
Ama-cholesterol aphansi, ngoba kubantu besifazane kwanda kancane kancane, kufinyelela amanani aphezulu avumelekile esikhathini se-postmenopausal.
Ithebula elingezansi libonisa izinkomba ezibhekisela kuzo i-cholesterol ephelele (ku-mmol / l) ngokuya ngobulili nobudala.
Iminyaka yobudala Amadoda Abesifazane
ngaphezulu kwama-70 3,73-6,86 4,48-7,25
Njengoba kungabonakala etafuleni, amanani aphezulu aphezulu avumelekile wamadoda asebedlulile ku-milenia yeminyaka engama-50 asezingeni le-7.10-7.17 mmol / l.
Amazinga we-cholesterol asukela ku-7.2-7.6 futhi aze afika kumayunithi angama-7.85 abhekwa njengomkhawulo ophezulu wokujwayelekile kwabesifazane asebekhulile. Ngenxa yesilinganiso esiphakeme kangako sokuqedwa kokukhiqizwa kwe-estrogen.
Khuphula kakhulu izinga le-cholesterol ephelele ngesikhathi sokukhulelwa - kufinyelela ku-7.9-13.7 mmol / l, izinkomba zeminyaka eziphindwe kabili zithathwa njengezamukelekile.
Eminyakeni engu-45 yobudala, izinga le-cholesterol ebangeni le-7.0-7.9 mmol / l kubo bobabili abesifazane nabesilisa lithathwa njengelibucayi, lidinga ukuhlolwa okuphelele ngokuphelele nezinyathelo zokunciphisa.
Izimpawu zokungahambi kahle
Ukuphazamiseka kwesifo se-cholesterol metabolism kuvela kuphela esigabeni sokulimala okukhulu ezindongeni ze-vascular, isigaba sokuqala sesi sifo sicishe sibe yi-asymptomatic.
Izimpawu zokuqala ze-cholesterol eyeqile egazini zingabonakala:
isisindo nokuqina kwemilenze lapho uhamba,
ukuvuvukala kanye nomuzwa wokuncipha ezinyaweni ngemuva kokukhanya kanzima, ushintsho lwe-varicose emilenzeni,
ukubonakala komphetho wokumpunga ngokuzungeza umkhondo wamehlo, ukuwohloka kwamehlo okubonakala,
kwehlise inkumbulo nobunzima bokugxila,
ukukhathala okukhulu kanye ne-asthenia ekuseni ngemuva kokulala ubusuku obugcwele,
grey zakuqala futhi wehlise potency emadodeni.
Kodwa-ke, kuthathwa njengophawu oluthile lwesici sama-hypercholesterolemia subcutaneous fatty plaque egcwele isisindo esimhlophe-ophuzi - xanthomas noma xanthelasms. Imvamisa zitholakala endaweni esezinkalweni ezungeze amehlo, zingatholakala naseceleni kwesikhumba sezintende nangokwesikhumba, ngaphezu kwamathenda, emadolweni, izindololowane, iminwe noma amabhuzu.
Le yindlela ama-xanthomas abukeka ngayo ngokunyuka okuqhubekayo kwe-cholesterol.
Ukuze uqaphele ukungalingani kwe-cholesterol ngesikhathi, njalo - njalo ngonyaka - bahlola igazi ukuze bathole i-cholesterol ne-lipoprotein.
Kusho ukuthini inkomba engenhla kwe-7 mmol / l?
Izinga le-cholesterol elingaphezu kwama-7.0 amayunithi likhombisa ukuthi umzimba awukwazi ukubhekana nokusetshenziswa kwalesi siphuzo semvelo se-lipophilic futhi udinga ukuxhaswa.
Ngaphandle kwalokho, i-atherossteosis ifinyelela ngokungenakugwenywa - i-pathology evilaphayo, kodwa eyingozi yesibeletho, lapho ukukhanyiswa kwemithambo yegazi kuhlangana kancane kancane ngenxa yokufakwa kwamafutha ngokweqile ezindongeni.
Ukwakheka kwamakhemikhali e-cholesterol ezindongeni zemithambo yegazi.
Ngenxa yalokhu, ukufinyelela kwegazi, futhi ngalo i-oksijini, ushukela, izakhi zomzimba ezithweni nezicubu kuyancipha, kuze kube yilapho yindlala yabo ephelele (ischemia) nokukhula kokungasebenzi kahle kokusebenza.
Izinkinga ezingamahlalakhona ze-hypercholesterolemia zivezwa:
Ngokuhlukaniswa kwe-thrombus noma i-atherosulinotic plaque kanye nokuvalwa kwabo ngokuphelele kwe-lumen ye-artery, inhlekelele yemithambo yethambo ingafinyelela isilinganiso esijabulisayo futhi izibonakalise:
ukushaya kwenhliziyo - ukufa kwengcezu yezicubu - i-myocardium, izinso, amathumbu,
ubuchopho - ischemic noma hemorrhagic - unhlangothi.
Isikhombisi esingaphezu kuka-7 mmol / L isibonakaliso sokulungisa ukudla nokudla ukuze ugweme imiphumela emibi.
Izizathu ezingenzeka zokwanda
Umphumela wokuhlaziywa kwe-cholesterol ungakhombisa amanani aphezulu uma kungaphambi kokuba kudliwe inqwaba yokudla okunamafutha noma kwenziwe iphutha lapho kulungiswa isifundo.
I-hypercholesterolemia ephikelelayo iyenzeka:
Okuyinhloko - Izakhi zofuzo ezinqunywe ngofuzo noma i-alimentary (ngenxa yokusetshenziswa ngokweqile kokudla okunamafutha).
Okwesibili - umphumela wama-organ pathologies anjenge-hypothyroidism, isifo sikashukela, ukukhuluphala, isifo se-gallstone, kanye nokuqina kwesibindi.
Izici ezidala ukungalingani kwe-lipid zifaka:
Uhlobo lobuntu olusabela kakhulu emphefumlweni ukuze lukhuthaze,
Imbangela yokugxuma kwe-cholesterol kungenzeka ukuthi kuthatha imithi ethile: ama-β-blockers, ama-diuretics, ama-immunosuppressants.
Yini okufanele uyenze ukuze wenze i-cholesterol ijwayelekile?
Ukwenza kube ngokwejwayelekile i-cholesterol metabolism, indlela ehlanganisiwe iyenziwa.
Izindlela ezingezona izidakamizwa zibandakanya:
Ungayikhulisa kanjani i-cholesterol enhle.
Ukulungiswa kokudla - yenqaba inyama enamafutha e-cholesterol nemikhiqizo yobisi kanye nama-carbohydrate asheshe ahluwe. Kunconywa ukuba udle ezingxenyeni ezincane zezitsha ezibilisiwe noma ezinomphunga - ngokweziqephu, izikhathi ezi-5-6 ngosuku. Imenyu yokudla iqukethe ubisi olunamafutha asezingeni eliphansi kanye nokudla kwasolwandle, inyama engenamafutha, kudla imifino eminingi, okusanhlamvu kanye namagamu, izithelo.
Ukusebenza ngokomzimba okungenzeka - ukuhamba ngamaminithi we-40-60 ngezinyathelo ezilinganiselwe ngokulawulwa kwenhliziyo (hhayi ephakeme kune-beats / sec.), Ukuzivocavoca umzimba ngokuzivocavoca.
Ukuqedwa kwezici ezicasulayo.
Imvamisa, odokotela bezenhliziyo banquma imishanguzo yokwehlisa i-cholesterol ezigulini ezingaphansi kweminyaka engama-40 ezimweni lapho ukwelashwa okungezona izidakamizwa kungalethi imiphumela ebonakalayo. E-arsenal yabo kunamaqembu ambalwa wezidakamizwa ze-hypocholesterolemic.
IStinsins (Atorvastatin, Rosuvastatin) - ziyakwazi ukwehlisa amazinga e-cholesterol ngokuvimbela ukukhiqizwa kwayo yisibindi nangokubhubhisa ama-lipoprotein aphansi. Banomphumela ophikisiwe wokulwa nokuvuvukala, bavikela izindonga zemithambo yegazi, bandisa amandla abo okunwebeka futhi bandise i-lumen.
Ama-fibrate (Bezafibrat, Fenofibrate, Clofibrate) - inqubo yabo yokusebenza isuselwe ekwandeni kokukhiqizwa kwe-lipoprotein ephezulu yokuxinana nokuphoqa ukubuyiswa kokubuya kwe-cholesterol. Ukubhubhisa ama-triglycerides, qinisa udonga lwe-vascular bese unciphise ukuvuvukala.
Ama-Sequestrants (Cholestan, Cholestipol) - izidakamizwa zesenzo esingaqondile.
Bakha amakhompiyutha angagqokile ama-asidi we-bile bese bephoqa ukuphuma kwabo emzimbeni kusuka emathunjini, ngaleyo ndlela bephoqa isibindi ukuthi sisebenzise i-cholesterol ngenkuthalo simiso se-bile acid.
Yisiphi isidakamizwa esidingekayo esimweni ngasinye sinqunywa udokotela wezinhliziyo ecabangana nezimpawu zomuntu ngamunye nesiguli nomlando womthwalo. Bathatha izidakamizwa ezokwehlisa i-cholesterol kuphela lapho zihlanganiswa nezindlela ezingezona izidakamizwa zokwelapha i-hypercholesterolemia, ngaphandle kwalokho umphumela wazo muhle.
Ukutholwa okufika ngesikhathi kwe-dyslipidemia, ukulawulwa kwe-cholesterol, i-LDL ne-HDL cholesterol kunconyelwa ngochwepheshe njalo ngonyaka, ngaphandle kokulinda ukuvela kwezimpawu zokuqala eziqondile ze-atherossteosis. Ezimweni zokuncipha okwedlulele kwemingcele yomzimba, izindlela ezingezona izidakamizwa zisetshenziselwa ukwenza ngokwejwayelekile i-cholesterol metabolism. Uma ungekho amandla amahle ngemuva kwezinyanga ezintathu, thintana nodokotela oyi-cardiologist ukuqokwa kwekhambi elithile.
Inhlanganisela yamaprotheni nama-lipids, okuyingxenye yolwelwesi lwamangqamuzana ezinzwa, ajikeleze ngokukhululeka egazini, ibizwa ngokuthi i-lipoproteins. Le ngxenye inesakhiwo esingafani namakhemikhali futhi ihlukaniswe ngamaqembu ayinhloko angama-4:
Phospholipids ephezulu kwabantu. Isilinganiso samaprotheni nama-lipids kuzo zingamaphesenti angama-52 kuye kwangama-48.
I-Low Density Cholesterol (LDL). Izakhiwo zinesilinganiso samaprotheni angama-21 kube ngamaphesenti angama-78 lipid.
I-triglycerides ephansi kakhulu-i-density triglycerides (VLDL), i-lipid idlula ngamaphesenti angama-91.
Ama-Holomicrons, cishe ahlanganiswa ngokuphelele ama-lipids.
Ama-lipid aphakama kakhulu egazini, anciphisa amathuba okuba nesifo senhliziyo, isifo sohlangothi, isifo senhliziyo, nesifo se-Alzheimer's. Imvamisa, igazi lingaqukatha kuze kufike ku-0,5 mmol / L. I-VLDLP ne-2.1-4.7 mmol / L. I-LDL Ukwanda kwalezi zinkomba kungenxa yezizathu eziningana.
Okuvame kakhulu yinkinga yokudla emzimbeni. Uma ngabe le patology ibonakala ngokwehla kwenani lama-receptors azwela i-LDL, lolu hlobo lwe-lipoprotein alunaso isikhathi sokungena ngaphakathi kwezicubu luhlale ezindongeni zemithambo yegazi. Ngenxa yalokhu, ama-atherosselotic plaque avela ayingozi empilweni yesiguli.
Esinye isizathu sokwephulwa kwesilinganiso sama-lipoprotein egazini kuhlotshaniswa nokungondleki, lapho umuntu ekudleni okuqinile isikhathi eside noma, kunalokho, udla amanoni amaningi nokudla okuphansi kwamaprotheni. I-Atherossteosis nayo ingakhula ngenxa yezifo zesibindi, ezikhiqiza ama-lipoprotein, kanye nezinso namathumbu, ahambisa futhi enze lokhu kungcolise.
Sikhuluma ngezinga elijwayelekile le-cholesterol esegazini, engqondweni yethu sikala isilinganiso esifanele phakathi kwe-HDL ne-LDL (VLDL).Lesi silinganiso ezigulini zabantu abadala akufanele singeqi kokuthathu. Ama-lipoprotein asezingeni eliphansi kakhulu emzimbeni, ayanda amathuba okuba nezifo zenhliziyo nezifo ezibulalayo. Ngezansi kwetafula eline-cholesterol
Izingane ezisukela eminyakeni emi-2 kuya kweli-12: 4.4-5.2
Ukuhlola isilinganiso esivamile kubantu abadala kufanele kususelwe eminyakeni yobudala, ngoba kwabesifazane ngemuva kokunqamuka kokuya esikhathini nakwabesilisa ngemuva kweminyaka engama-50, amazinga e-cholesterol egazi ayenyuka.
Kepha izingane, kubhekwa njengedingekile ukubheka lezi zinkomba kuphela uma kunokugula okukhulu noma ifa elibi.
Ezinye iziguli ezingane zibheka i-cholesterol kuze kube yiminyaka eyi-9 akuseluleki.
Izimpawu ze-cholesterol ephezulu (hypercholesterolemia)
Ukuxilongwa kwalesi sifo kuyinkimbinkimbi kakhulu ngoba iqiniso lokuthi ukuvela kwesifo lesi sifo akukho, futhi kuvame ukungalingani. Ngokungaqondile, i-cholesterol ephakeme iboniswa ngu:
Ukucindezela izinhlungu nokuphazamiseka esifubeni nasenhliziyweni.
I-peripheral vascular thrombosis.
Ukuya esikhathini ekuqaleni kwabesifazane.
Ubuhlungu bomlenze nobuthakathaka bemikhawulo engezansi ngenxa yokuphazamiseka kokujikeleza kwegazi.
Isibonakaliso esicacile se-atherossteosis ukubukeka ngaphansi kwesikhumba sezinkophe zezinwele eziphuzi eziphuzi eziqukethe i-cholesterol (xanthelasm). Ukusolwa kwe-hypercholesterolemia kudinga ukuxilongwa ngokucophelela ukuthola izimbangela zayo futhi kuqede lesi sifo esiyimbangela. Iziguli zinikezwa izifundo ezinjalo:
Ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemical.
Ukuhlaziywa kofuzo ukuthola isici sefa.
Ukukalwa komfutho wegazi.
Udokotela ubuye aqoqe imininingwane ngezifo ezingamahlalakhona zesiguli nokuba khona kwemikhuba emibi. Lokhu kukuvumela ukuthi uqale ukwelashwa ngendlela esheshayo futhi uvikele izinkinga ezinkulu njengokushaywa unhlangothi, ukuhlasela kwesikhashana nokuhlasela kwenhliziyo.
Ukwelashwa kokuphazamiseka kwe-cholesterol metabolism
Ukuqeda ukuphazamiseka kwe-lipid metabolism, kunikezwa umuthi kanye nokulungiswa okuphoqekile kwalesi sifo ngokudla. Ezidakamizweni, ezisebenzayo kakhulu yilezi:
Izicucu zokubopha umzimba ezibopha i-cholesterol emathunjini.
Iyacubungula, isheshise imetabolism.
Uma kwenzeka kufakwa ukungasebenzi kwamathumbu emathunjini, kunqunywe iPancreatin neGuarem, ngezifo zesibindi - i-Essenitsale. Ukubuyisela isilinganiso se-cholesterol enhle nokubi egazini - i-Probucol. Ukwelapha okulinganiselayo kufaka phakathi imijovo kavithamini B2.
Ukuze ube nemikhumbi ehlanzekile engenawo ama-sclerotic plaque, awudingi nje ukuhola impilo enempilo futhi ulawule i-cholesterol yegazi, kodwa futhi ubheke nokudla kwakho, unikezwe okuqukethwe yi-cholesterol ekudleni
Ukwenza kube lula ukuzulazula ngengozi engaba khona yemikhiqizo ethile, ungasebenzisa ithebula elilandelayo elibonisa okuqukethwe i-cholesterol kumagremu ayi-100 okudla: